ဘယ်လိုပြောကြမလဲ – Grab Love Story
အိဖြူသဇင်ကျတော့လည်း ဇာတ်လမ်းက တမျိုး အဖေရော အမေရောက စည်းကမ်းကြီးသဖြင့် သူ့အတွက်က ဟိုဒီကိစ္စဆိုသည်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ လုပ်ရမည့် အရာလို့ထင်သည်၊ ညီညီ မှာသူ့ရီးစားလေး ကိုသူများတွေလို ဟိုကိုင် ဒီကိုင် လုပ်ချင်သည်၊ အိဖြူက လက်မခံ၊ အမှိုက်က ပြဿဒ် မီးလောင်ဆိုသလို စကားခနခန များလာပြီး နောက်ဆုံးတော့ ညီညီက ဟိုကောင်မလေးလိုလို ဒီကောင်မလေးလိုလို လုပ်လာရမှ အိဖြူက ဒီလောက် သစွာမရှိတာ သူ့အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်မရွေးချင်တော့ ဆိုတာ ရီးစားအဖြစ်မှ ပြတ်စဲလိုက်သည်၊
နောက်အချစ်လည်း မရှာချင်တော့၊ စာကိုသာ ဖိကျက်နေတော့သည်၊ နိုင်နိုင်ကတော့ ထည်လဲ တွဲနေတော့သည်၊ အခုဆို ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်လည်း သူ့အဖို့ မပျင်းတော့ပြီ၊ သူ့အဖို့တော့ ယောက်ျားလေး တော်တော်များများကိုလည်း မြည်းစမ်းဖူးလေပြီ၊ သူ့ ပထွေး ဦးချစ်ဆွေကြောင့်လားမသိ၊ သူက သူ့ထက်ကြီးသော ဘဲကြီးတွေကို ပိုကြိုက်တတ်လာသည်၊ ကျောင်းမှာလည်း မုဆိုးဖို ကျောင်းဆရာများ နှင့် ဘာညာကွိကွလေးတွေ အမြည်းတို့စားရင်း၊ က ကျောင်းစာများမှာ စာအရမ်းကြည့်နေသော အိဖြူနှင့် ဂရိတ်တူတူ ရနေသည်။ ဤသို့ဖြင့် သူတို့၏ ပထမအရွယ်ပညာရှာခြင်းပြီးဆုံးပြီမို့ နှစ်ဦးသား လမ်းခွဲသွားကြရသော်လည်း အဆက်အသွယ်မှာ မပြတ်ကြချေ၊ တဦးနှင့်တဦး အမြဲတမ်းလိုလို အဆက်အသွယ်ရှိပြီး အနည်းဆုံးတနှစ်တခါလောက်တော့ ဆုံမိကြလေသည်။
နောက်တော့ နိုင်နိုင်မှာ သူ၏ လည်ပတ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် သူ့ထက် အသက် ၅နှစ်မျှကြီးသူ ဗိုလ်မူးအောင်နိုင် နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့လေသည်၊ အိဖြူသဇင်ကမူ မိဘ ပြောစကားနားထောင်ပြီး မိဘချင်း စေ့စပ်သဘောတူခဲ့သူ ကိုမျိုးဆွေ ဆိုသော အာအိုင်တီကျောင်းဆင်း၊ သူနှင့်အသက်တူ ရွယ်တူ တဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရလေသည်။ အိဖြူသဇင်၏ ယောက်ခမ များမှာ ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းများပိုင်ဆိုင်ပြီး သားလေး တယောက်တည်းရှိရာ သူတို့ စီးပွားရေးကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စေလိုသော်လည်း ကိုမျိုးဆွေက သူငယ်ချင်းများ လည်း အလုပ်လုပ်နေသော စင်္ကာပူကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြည့်ချင်နေလေသည်၊ သူက အဆင်ပြေရင် အိဖြူကိုပါ ခေါ်သွားပြီး အတူတူ နေချင်ပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်ရှာရအုန်းမှာမို့ တနှစ်လောက်သာ ညားထားရသေးသော မယားလေးကို သူတို့ မြို့မှာ ခနထားခဲ့ရလေသည်၊ အိဖြူမှာလည်း အီကိုက ဆင်းသူမို့ ငွေစာရင်း များကိုင်တွယ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူမို့ သူ့မိဖများမှာလည်း သူတို့ အလုပ်တွင် စပြီး အားကိုးနေရပြီဖြစ်ရာ၊ အိဖြူမှာ သူ့ယောက္ခမ များနှင့် ကျန်နေခဲ့ရလေသည်။
နိုင်နိုင်မှာ တော့ အရာရှိရိပ်သာ မှာ အချွေရံ အသင်းအပင်း တွေနဲ့ နေထိုင်ရင်း ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ပဲ ဘဝစည်းစိမ် ကောင်းကောင်းခံစားနေရ လေသည်။ တခုသော နွေရာသီမှာ သူ့ယောက်ျား ဗိုလ်မူးအောင်နိုင် အထူးစစ်ဆင်ရေးဖြင့် နယ်ကို သွားနေရသဖြင့် တယောက်ထည်းပျင်းလာရာ၊ အိဖြူသဇင် ဆီသို့ ဖုန်းဆက်မိလေသည်၊ အိဖြူသဇင်ကလည်း သူ့ယောက်ျား စင်္ကာပူသွားအလုပ်လုပ်နေသည်မှာ တနှစ်နီးပါးရှိနေပြီး သူလည်း အခုတော့ ယောက္ခမ အလုပ်နဲ့ ခြေချူပ်မိသလိုဖြစ်နေတော့ ၊ ကျောင်းတုန်းက အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း လာလည်မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာအားရ ဖိတ်ခေါ်လိုက်လေသည်။ နေဖို့က သူ့အတွက်က သူတို့ပိုင်ဟော်တယ်ခန်းတခန်းကို ပြင်ပေးလိုက်ရုံပင်။ သို့နှင့် နိုင်နိုင်တယောက် အိဖြူရှိရာ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း မြို့ကြီးဆီသို့ ရောက်လာခဲ့ရလေတော့သည်။
နိုင်နိုင် ရောက်လာတော့ အိဖြူက သူ့ယောက္ခထီးယောက္ခမ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၊ဒေါ်နီလာ တို့ နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေတို့ကလည်း အိဖြူသူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူတို့ ချွေးမလေးကို ချစ်သလိုပင် ချစ်ခင်မိကြပြီး လိုလေသေးမရှိ ပြုစုလေသည်။ သို့နှင့် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်၊ သူတို့ မြို့လေး အနားတဝိုက် ဘုရားစုံဖူး၊ ဟိုနေရာဒီနေရာသွား၊ ဟိုအစားဒီအစား စားဖြင့် ပျော်ရွှင်နေကြလေသည်။ တနေ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အစားအသောက်သောင်းကျမ်းလိုက်တာ၊ အိဖြူဇင်တယောက် အစားအသောက်တခုခု က မသန့်၍လားမသိ အထက်လှန်အောက်ရှောဖြစ်ကာ ဖျားတော့သည်။ သူ့ကို ဆရာဝန်က အစားမစားခိုင်းသေးပဲ အရည်ပဲသောက်နေရလေရာ၊ အိဖြူခမျာ အိပ်ယာထဲ နားနေရလေတော့သည်၊
သူဆီလာလည်သော သူငယ်ချင်းကို ပျင်းနေမှာစိုး၍ နိုင်နိုင့်အတွက် ခရီးစဉ်များကို လုပ်ပေးဖို့ သူ့ယောက္ခမ များကို ပြောကြားပေးလေသည်၊ သို့နှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေက အနီးနားရှိတောင်ပေါ်မြို့လေးသို့ သူ့ကားနှင့်လိုက်ပို့ပေးမည်ဟု ပြောလေသည်၊ နိုင်နိုင်က ငြင်းသော်လည်း အိဖြူက အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းသောကြောင့် နိုင်နိုင်က သဘောတူလိုက်လေသည်။ ဒေါ်နီလာက အိဖြူကို စိတ်မချတာနှင့် ဟော်တယ် အလုပ်များလည်း ရှိတာကြောင့် နေခဲ့ပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ နှင့် နိုင်နိုင် သာ ကားလေးတစီးဖြင့် စောစောစီးစီး ထထွက်လာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ အသက် ၅၀ ကျော်ကျော် သာရှိသေးပြီး အားကစားလည်း လုပ်သူမို့လားမသိ အရပ်က လည်းမြင့်မြင့်၊ ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ်နှင့် လက်မောင်းကြွက်သားများလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိသည်၊ မျက်နှာကလည်းအင်မတန်ခန့်ညားပြီး ပြေပြစ်သူဖြစ်လေရာ၊ နိုင်နိုင့် အဖို့ ရင်ခုံချင်စရာ ဖြစ်လာရလေသည်၊ သူ့ယောက်ျား၊ စစ်ဆင်ရေးသွားနေတာလည်း ကြာပြီမဟုတ်လား၊ ကျောင်းမှာထည်းက ယောက်ျားလေး များစွာ အတွေ့အကြုံရှိဘူးသူ၊ ဦးချစ်ဆွေမှ အစ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူ အမျိုးသားများ အပေါ်မှာ ပို၍ တပ်မက်မှုရှိနေသော နိုင်နိုင် အဖို့၊ ငတ်နေတာလည်းကြာပြီမဟုတ်လား၊ အိမ်ထောင်ကျပြီးကထဲက တချောင်းကိုင်ဖြစ်နေရတာ ပျင်းသလိုလိုရှိရသည့်ကြားက အဲဒီတချောင်းကလည်း မစားရတာကြာပြီ မဟုတ်ပါလား၊ နိုင်နိုင့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာ တော်တော့်ကို ကံသီလို့ရတာပဲလို့တွေးနေမိသည်၊
အင်း ဒီခရီးစဉ်အတွင်း မှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ကတော့ နင်တော်တော်ညံ့တယ်ပြောရမှာပဲ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြောနေမိလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာလည်း ခေသူမဟုတ်ခြေ၊ နဂိုထဲက မိန်းမ ဝါသနာပါသူဖြစ်ပြီး ဟော်တယ်လုပ်ငန်း လည်း လုပ်လာခဲ့သူမို့၊ မိန်းမပေါင်းများစွာနှင့် အတွေ့အကြုံရှိဘူးပြီး၊ ယခုထိလည်း ကဲနေသူဖြစ်လေသည်။ အခုလည်း သူတို့ ဟော်တယ် သုံးခု အနက်၊ တခုမှာ ခန့်ထားသည့် ဟော်တယ်မန်နေဂျာမလေး မေသူစိုး နှင့် ညှိ နေ လေသည်၊ တခါတလေ ဟော်တယ် သွားစစ်သလိုနှင့် ထိုဟော်တယ်က အခန်းတခုမှာ မေသူစိုးကို ဖြုတ်လေ့ရှိလေသည်၊ သို့သော်လည်း ဝန်ထမ်းများ ရိပ်မိသွား နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် သူတို့ မိသားစု ရဲ့ ဗေကေးရှင်းဟုန်းမ် လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ၊တောင်ပေါ်မြို့ကလေး က အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး ဗြင်းလေ့ရှိသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက ကားကို တောင်တက်လမ်းကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းလာရင်းက နိုင်နိုင်ကျော့နွယ်နှင့် စကားစမြီ ပြောလာခဲ့လေသည်။
နိုင်နိုင် ၏ အမူအယာပုံပန်း သဏ္ဍန်ကို လေ့လာလိုက်တာနှင့် သူကြံရင် ရနိုင်မည်ဆိုတာကို ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကသိနေပြီ။ နိုင်နိုင့် ပုံစံကလည်း မဆွတ်ခင်က ညွှတ်နေတဲ့ပုံမျိုး၊ သူ့ကို စကားပြောတာက အစ၊ ပေါင်ပုတ်လိုက်၊ ပုခုံးစွန်းလေး တိုက်လိုက်နှင့်၊ ဆိုတော့၊ စားနေကြကြောင်ပါးကြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် ပုဆိုးအောက်မှ လီးက အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲမှာကို အတင်း ရုန်းထနေရသည်။ လမ်းကလည်း တောင်တက်လမ်း၊ ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် ဆိုတော့ ဂီယာကလည်း တချိန်လုံးချိန်းနေရ သည်၊ သူ့လက်တွေက နိုင်နိုင့်ပေါင်လုံလေးကို ထိမိနေသော်လည်း နိုင်နိုင်က နေရာအကျယ်ကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ မလှုပ်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ကို သူတို့ အပန်းဖြေ အိမ်လေး သို့ တန်းခေါ်သွားပြီး လုပ်ရင်တောင် ရနေပြီဆိုတာသိနေသော်လည်း ၊ဒီတခါတော့ သူ မုဆိုးမလုပ်ပဲ နှင့် သားကောင် အနေဖြင့် လှုပ်ရှားလိုက်အုန်းမည်ဟု၊ တွေးရင်း သဘောကျနေမိသည်။
ဒီလောက်တောင် ဆာနေတဲ့ ကောင်မလေးကို ငါ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ် အဖိုးကြီးပုံ ဖမ်းနေလိုက်အုန်းမည်၊ အဲဒါမှ သူလည်း ပိုပြီး စိတ်တက်ကြွမည်ဟု တွေးလိုက်၏၊ လမ်းမှာ ခနတဖြုတ်နား ၊ လဘက်ရည်ရေးဘာလေးသောက်တော့လည်း ငြုတုတု ဟိုထိဒီထိ လုပ်လာသော နိုင်နိုင့်ကို အားနာသလို၊ မခုပ်တတ်သည့်ကြောင်အိုကြီးလို လုပ်နေလိုက်သဖြင့်၊ နိုင်နိုင်တယောက် ပိုအတင့်ရဲလာ၏၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေလည်း အဲလို ကစားရတာကို ပျော်နေမိသည်။ နိုင်နိုင့် ကိုယ်လုံးလေးကို မသိမသာခိုးကြည့်ရင်းလည်း သွားရည်ကျနေရသည်၊ အင်း သူအခု လုပ်နေရသော မေသူစိုး ကတောင် နိုင်နိုင်ထက် ၅နှစ်လောက်တော့ ကြီးအုန်းမည်၊ နောက်ပြီး မေသူစိုးက ခလေးတယောက်အမေ၊ နိုင်နိုင်က ရုပ်အချောစားကြီးမဟုတ်သော်လည်း အသားညိုညို ဖြင့် စွဲဆောင်မှုတော့ ရှိသည်၊ ခလေးလည်း မမွေးဘူးသေး၊ နို့ထွားထွား၊ ဖင်ကားကား ဆိုတော့ အားမနာ တမ်းလုပ်လို့ရမည့် ဘော်ဒီမျိုး မဟုတ်လား။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက တောင်ပေါ်မြို့ကလေးရောက်တော့ နာမည်ကြီး ရေတံခွန်ရှိရာကို ပထမဆုံး သွားလိုက်သည်၊ ရှုခင်းတွေက လှ ရေသံလေးတွေနဲ့ သာယာလှသဖြင့် နိုင်နိုင်တယောက် အတော်ပျော်မိသည်၊ ကြိုးတံတားလေးကို ဖြတ်လျှောက်တော့ နိုင်နိုင် တယောက်ကြောက်သဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်မောင်းကို တွယ်ဖက် ၍ လျှောက်သည်၊
သူ့နို့ကြီးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ လက်မောင်းကို အိနေအောင် ဖိထားသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ သန်မာသော ကြွက်သား များ၏ အထိအတွေ့က နိုင်နိုင့် ကို ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ဖြစ်စေသည်၊ ကြိုးတံတားလေး လှေခါးမှ ဆင်းတော့ ရေတွေ ရွှဲနေသည့်သစ်သား လှေခါးထစ်များမှာ ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့် ချော်ကျမည် စိုးသဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့် လက်ကလေးကို ဆွဲ၊ ခါးကလေးကို ထိန်းကာ ဆင်းလာရသည်၊ နိုင်နိုင့်မှာ ဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့၊ ပေါင်ခွဆုံမှာတောင် အရည်တွေ စို့နေရပြီ။ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း အရပ်ကြီးမှာ မြင့်မားလှသဖြင့် နိုင်နိုင့်မှာ သူ့ကိုယ်ကို လှဲပြိုမသွားအောင်ထိန်းရင်း ပြန်လည်တွယ်ဖက်ထားရာ၊ သူ့မျက်နှာလေးမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေရလေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက သူ့ရင်ခွင်ထဲ မှာ ကိုယ်လုံးလေးတုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေရှာသော နိုင်နိုင် ကို အသာဖက်ထားရင်း ကျောပြင်လေးကို ပွတ်ပေးလို့၊ ..ဟင်..နိုင်နိုင် ကိုယ်လုံးလေးလည်း တုန်လို့ပါလား၊ အမြင့်ကို ကြောက်တယ်ထင်တယ်..
..ဟုတ်..ဟုတ်..ဦးဦးအောင်….နိုင့်ရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်မိလို့ထင်တယ်… ..အင်း ခနနားလိုက်အုန်းလေ နိုင်နိုင်..မလှုပ်နဲ့အုန်း၊ နောက်တဆင့်ကို ဦး တွဲခေါ်သွားမယ် နိုင်နိုင် မျက်စေ့မှိတ်ချင်မှိတ်ထားလိုက်ပေါ့… ထိုကဲ့သို့ပြောနေစဉ်မှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ဘတ်တွင်နိုင်နိုင် ၏ နို့ကြီးများမှာလည်း ဖိကပ်မိနေပြီး၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ကျောပြင်လေးကို သူ့လက်ဖဝါးကြီးဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေလေသည်။ နိုင်နိုင်မှာ သူ့ ပေါင်ရင်းပေါ်သို့ ထိုးထောက်လာသည့် ပူပူနွေးနွေး ကြီးမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ပုဆိုးအောက်မှ လီးကြီးမှန်း သိနေသဖြင့် တိတ်တခိုးလေး ပျော်နေမိလေသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် လှေခါးထစ်များကို ဆင်းကြတာတွင်တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့်ခါးလေးကိုသိုင်းဖက်ပြီး ဆင်းလာခဲ့ကြလေတော့သည်၊ အောက်ခြေမှ လဘက်ရည်ဆိုင်လေးတွင်ထိုင်ပြီး ခနနားကြတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ ဘောတောင် အောင့်ချင်သလိုဖြစ်လာရလေသည်၊ ထို့ကြောင့် အချိန်သိပ်မဆွဲချင်တော့ပဲ။
..နိုင်နိုင်..ဦးတို့ ဒီမြို့တက်လာရင် အနားယူဖို့ ဆိုပြီး ဝယ်ထားတဲ့ အိမ်လေးရှိတယ်..အဲဒီမှာ ခနသွားနား ကြရအောင်လား၊ အဲဒီက ဦးတို့ ခိုင်းတဲ့သူတွေကို စားစရာသွားဝယ်ခိုင်းပြီး အဲမှာပဲ စားကြမယ်လေ.. ..ကောင်းသားပဲ ဦးဦးအောင်…. ဦးအောင်အောင်ဆွေတို့ အိမ်လေးရှိရာသို့ရောက်သည်နှင့် သူတို့၏ ခြံကို စောင့်ပေးသော ဦးသိန်း ကထွက်လာပြီး တံခါးဖွင့်ပေးသည်၊ ဦးသိန်းမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ တပည့်ရင်းဖြစ်ပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ မိန်းမတွေ ခေါ်ခေါ်လာပြီး ဖြုတ်သည်မှာ ရိုးနေပြီ မို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မပြောတော့ပေ။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင် က ကိုယ့်ဘာသာ လျှောက်နိုင်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း စိုးရိမ်သလိုလိုဖြင့် ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး အိပ်ခန်းရှိရာသို့ လိုက်ပို့လေသည်၊ အိပ်ခန်းထဲမှာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာလည်း ရှိသဖြင့် နိုင်နိုင့်ကို သုံးချင်က သုံးဖို့၊ သူ အစားအသောက်တွေအတွက် စီစဉ်လိုက်အုန်းမည်ဆိုကာ ထွက်သွားလိုက်လေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ က ဦးသိန်းကို အစားအသောက်များ ဝယ်ဖို့နှင့် ပြီးပါက နောက်ဖေးမီးဖိုထဲတွင် ပြင်ထားပေးဖို့၊ အိမ်ရှေ့နှင့် အိပ်ခန်းဖက်ကို မလာဖို့ မှာလိုက်လေသည်၊ ဦးသိန်းကလည်း သဘောပေါက်ပါသည်၊ နောက်ဖေးပေါက်မှာပင် အစားအသောက်များ ဝယ်ဖို့ ထွက်သွားလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာတွန်းကြည့်ရာ ဂလန့်မချထားသဖြင့် ဝင်လာခဲ့လိုက်ရာ ကုတင်ပေါ်၍ နဖူးပေါ်လက်တင်လျှက် ပက်လက်လေး လှဲနေသော နိုင်နိုင့်ကို တွေ့ရလေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက လိုရမယ်ရ တံခါးကို အသံမကြားအောင်စေ့ပြီး ဂလန့်ချလိုက်လေသည်၊ နောက်တော့ ကုတင်စောင်း နိုင်နိုင့် အနားထိုင်လိုက်ပြီး၊ ..ဘယ်လိုနေသေးလဲ နိုင်နိုင်.. ..အင်း..သက်သာသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူးပဲနော် ဦးဦးအောင်… ..အမလေးကွာ ဒါလေးများ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး၊.. နိုင်နိုင် က မျက်စေ့ပေါ်မှ လက်ကို ဖယ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရာ သူ့ကို ငုံ့မိုးကြည့်နေသော ဦးအောင်အောင်ဆွေကို တွေ့လိုက်ရလေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ အတော်ပင် တဏှာကြောက တင်းနေပြီ ဖြစ်ရာ ညိုချောလေးချောနေသော နိုင်နိုင့်ကို ငုံ့ကာ နမ်းလိုက်မိလေသည်၊ ပထမတော့ နဖူးလေးကို ဖြစ်သည်၊ သို့သော်လည်း နိုင်နိုင်က စိတ်ဆိုးပုံမပြပဲ၊ ..အို့…မတော်ဘူးထင်တယ် ဦးရယ်…. လို့ပြောနေတာနဲ့ နူတ်ခမ်းကို ပြောင်းနမ်းလိုက်လေသည်၊ နိုင်နိုင်က ချက်ခြင်းပင် တုန့်ပြန်အနမ်းတွေ ပေးလာတော့သည်၊ ကုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား လူးလိမ့်နမ်းရင်းက အဝတ်အစားတွေကို တစမကျန်ချွတ်ပြစ်လိုက်ကြလေသည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ အတွေ့အကြုံရှိနေသော၊ လက်တွေ ပါးစပ်တွေ၊ လျှာတွေက နိုင်နိုင့်တကိုယ်လုံးက ကာမခလုပ်တွေ ရှိသမျှကို အကုန်ဖွင့်ပေးနေသလိုပဲ၊ နိုင်နိုင့်ခမျာ သူ့စောက်ဖုတ်ကလေးမှာ ဒီလောက် အရည်ရွမ်းရွမ်း မစိုဖြစ်တာကြာလှပြီကော။ သူ့ပထွေး ဦးချစ်ဆွေနှင့်တုန်းက လိုမျိုး အရသာတွေ ပြန်တွေ့နေရလေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နိုင်နိုင့် ပေါင်တန် ဖြောင့်စင်းစင်းလေး နှစ်ချောင်းကို ဒူးထောင်လျှက်ကားစေပြီး သူ့မျက်နှာကို နိုင်နိုင့်စောက်ဖုတ်လေးပေါ်အပ်ကာ နိုင်နိုင်၏ စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးများကို ရက်ပေးလေသည်။ နိုင်နိုင်က အိပ်ယာပေါ်မှာ ကော့ပြန်တက်နေပြီး တချီပြီးသွားရှာလေသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေက ဆက်ပြီး ရက်နေသေးသဖြင့်၊ နိုင်နိုင်ခမျာ မနေနိုင်ရှာတော့ပဲ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်မောင်းနှစ်ဘက်ကို အတင်းဆွဲမရင်း၊ …ဦးဦးအောင်..နိုင့်ကို ..လုပ်ပေးပါတော့.. ဟုပြောလိုက်ရှာတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်တန်ထွားထွားကြီးက နိုင်နိုင့် ကို အားရ ကျေနပ်စေခဲ့သလို၊ နိုင်နိုင့်၏ ပြည့်တင်းတင်းနို့ကလေးများ၊နှင့် စေးကျပ်သော စောက်ဖုတ်ကလေးက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို လိုးလို့ မဝအောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်၊ နိုင်နိုင်ကလည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်ချောင်းကြီးကို အားရပါးရ စုပ်ပေးခဲ့သလို၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း နိုင်နိုင့် စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းရက်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြင့် သူတို့ နှစ်ဦး၏ ခရီးစဉ်မှာ ရေတံခွန်တခုထည်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ …ကောင်းလိုက်တာ နိုင်လေးရယ်… ..နိုင်တော့ ဦးဦးကို ဆွဲသွားပြီ ထင်တာပဲ၊ ဦးဦးက အရမ်းကျွမ်းတာပဲ..ခစ်ခစ်… နိုင်နိုင်နှင့် ဦးဦးတို့ ဇာတ်လမ်းက သူတို့ မြို့ပြန်ရောက်သည်အထိဆက်လာသည်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ အဖို့ကလည်း နိုင်နိုင်တည်းနေတာက သူတို့ပိုင်တဲ့ ဟော်တည်ဆိုတော့ သော့အပိုတချောင်းယူထားလိုက်ရုံပင်၊ နိုင်နိုင်ကလည်း အမြဲကြိုဆိုလျှက်။ အိဖြူကလည်း သူ့သူငယ်ချင်းနှင့် သူ့ယောက္ခထီး တို့ ဆက်ဆံရေးကို ရိပ်မိသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းလည်း သူသိသည်မို့၊ ..နိုင်နိုင်ရယ်..နင်ကတော့ တကယ်ပဲ.. ဟုသာပြောမိရှာသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်း ရောက်တုန်း ပျော်နေရင်ပြီးတာပဲလေဟု လွှတ်ပေးထား လိုက်လေသည်။
အိဖြူ တယောက် တိမ်တိုက်တွေကြားမှာ လှဲလှောင်းလို့ ၊ တိမ်တွေကလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း လွင့်မျှောလို့ ငြိမ့်ငြိမ့်ကလေး သူ့ကို ပုခက်လွဲပြီး ချော့သိပ်နေသလိုပဲ၊ အဲဒီအချိန်မှာ တယောက်ယောက်က သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို လာခွဲလိုက်သည်၊ သူငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုမျိုးဆွေ၊ အို ကိုမျိုး ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ သူ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုလည်း ဆွဲချွတ်သွားပြီ အို့၊ ကိုမျိုးနော် တော်တော် ကဲနေ၊ ဘယ်ကနေဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ ကိုမျိုးရယ်၊ အိဖြူလွမ်းနေတာကြာလှပေါ့၊ အို အိဖြူ အဖုတ်လေးကို သူနမ်းနေတယ်၊
ဟွန့် သူတခါမှလည်း မလုပ်ဘူးပဲနဲ့၊ အိဖြူကြည့်ဖူးတဲ့ ဟိုရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါပါနေတာလေ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဲဒီနေရာတွေကို အမျိုးသားတွေ အားရပါးရ လျှက်ပေးတာလေ၊ အိဖြူကြည့်ကြည့်ပြီး ကြက်သည်းထမိတယ်၊ ကိုမျိုးများ သူ့ကို လုပ်ပေးလေမလားလို့ စိတ်ကူးလည်း ခနခန ယဉ်မိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုမျိုးက မလုပ်ပေးဘူးလေ။ အိဖြူ ပါးစပ်က ဘယ်လိုပြောလို့ထွက်မှာလဲလို့။ ခုတော့ အိဖြူရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ သူ့ခေါင်းကြီးဝင်လို့ အိဖြူအဖုတ်လေးကို အားရပါးရ သူ့လျှာစိုစို နွေးနွေးကြီးနဲ့ လျှက်နေလိုက်တာ၊ အိဖြူ ဖင်ကလေးပါ ကော့ပေးလိုက်မိတယ်၊ အိဖြူ သူ့ကိုယ်အောက်က တိမ်စိုင်တွေကိုလည်း လက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိတယ်၊ သူ့လျှာကြီးက အိဖြူရဲ့ အစေ့လေးကို ဖိပြီးထိုးပေးရင်းက အိဖြူရဲ့ စောက်ခေါင်းနံရံလေးတွေကို ပါမှီသလောက် လှမ်းရက်လိုက်တော့၊ အိဖြူကိုယ်လုံးလေး တဆတ်ဆတ်တုံခါပြီးတော့ ကာမ အရသာကို အထွတ်အထိတ်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်၊ အိဖြူမောလိုက်တာ ကိုမျိုးရယ်။
နောက်တော့ အိဖြူ အမောဖြေနေလို့မှ မဆုံးသေးဘူး အိဖြူရဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ထပ်ဖြဲပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ကြီးဝင်လာတယ်၊ နောက်တော့ အိဖြူ စောက်ဖုတ်လေး အဝမှာ ပူနွေးနွေး မာမာ အချောင်းကြီး တေ့ပြီး အသာဖိသွင်းလာတယ်၊ အား နာတယ် ကိုမျိုးရယ်၊ ကိုမျိုး အရင်ကလိုမဟုတ်ပါလား အရမ်းကျပ်နေတယ်၊ အို့၊ အိဖြူအိပ်ယာကလန့်နိုးလာတယ်၊ သူ့အိပ်မက်ကလည်း တကယ်လိုပဲလို့တွေးနေတုန်းပဲ သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးခံစားလိုက်ရတယ်၊ ဟင်ဒါဆိုရင် တကယ်ပေါ့၊ အို၊ ကိုမျိုးဘယ်တုန်းကပြန်ရောက်နေတာလည်း၊ တခါထဲဘာမပြောညာမပြောနဲ့၊ အိဖြူပြုံးတော့မလိုဖြစ်သွားရာက တချိန်ထည်းမှာ ထိပ်လန့်သွားခဲ့ရသည်။ ဟင်၊ ငါ၊ ငါ၊ အိပ်နေတာ ငါ့အိပ်ယာမှ မဟုတ်တာ၊ ဒါဆိုရင်၊ ဟောတော့။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ရေမိုးချိုး အမွှေးနံ့သာ ဆွတ်ဖြန်းပြီးတော့ ဘလက်လေဘယ်လေး လက်နှစ်လုံးလောက်ကို ရေခဲလေးနဲ့ အသာလှုပ်ခပ်ဖျော်ရင်း ဇိမ်ခံစုပ်လိုက်သည်၊ တခွက်ကုန်သွားတော့ နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်၊ အင်း သွားဖို့တော့ အချိန်ကျပြီ၊ အခုန ရေမချိုးခင်တုန်းက သောက်ထားတာနဲ့ ဆိုတော်တော်တော့ရေချိန်ကိုက်နေပြီ မဟုတ်လား၊ ဒီညမှာ သူ့သူငယ်ချင်း နိုင်ငံခြားမှာ ပြန်လာလည်တုန်းလက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့ ဆီယားလာ့ ကို စမ်းဖို့ စဉ်းစားထားလို့ ရင်နည်းနည်းခုံနေသည်၊
အဲဒီကောင်အပြောအရတော့၊ မင်းစိတ်လာလို့ကတော့ လီးက နှစ်ရက်လောက် ဆက်တိုက်ထောင်နိုင်တယ် ဆိုပဲ၊ ဟ မင်းဟာက အဲလောက်လီးအကြာကြီးတောင်ရရင်သေပြီပေါ့ကွလို့ ပြောလိုက်တော့၊ သူငယ်ချင်းက အားရပါးရရီမောပြီး၊ အဲလို မဟုတ်ဘူးကွ၊ သူက မင်းစိတ်ထလာတာနဲ့တောင်ပြီး လုပ်ဖို့ရယ်ဒီဖြစ်တာ၊ မင်းတချီပြီးသွားရင်ခနပျော့သွားရော၊ မင်းစိတ်ပြန်ထလာမှ ပြန်တောင်တာ၊ မင်းစိတ်ပြန်မထတော့ဘူးဆိုရင်လည်း မတောင်တော့ဘူး၊တဲ့။ ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေမှာ လီးတောင်ဖို့က ပြဿနာမရှိ၊ သို့သော်လည်း အခု အသက်အရွယ်မှာ က ငယ်ငယ်ကလိုမဟုတ်တော့ တချီပြီးသွားရင် နောက်တခါပြန်တောင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်နှင့်မလွယ်တော့ ကံကောင်းရင်တော့ နေ့တဝက်လောက်နှင့်ပြန်ထနိုင်သည်၊ သို့သော် နိုင်နိုင့် လိုမျိုးကောင်မလေး မျိုးက ကိုယ့်ဘေးမှာ တချိန်လုံးမရှိ၊ ငယ်ငယ်တုန်းကလို တညထဲ နှင့် လေးချီလောက်ဆွဲဖို့ဆိုတာက ဆေးမပါရင်မဖြစ်နိုင်တော့၊ သူဒီည နိုင်နိုင်နှင့် တညလုံးနေမည်ဟု မှန်းထားသဖြင့် သူ့သူငယ်ချင်းပေးသော ဆေးကို အိမ်အထွက်မှာ သောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့သည်။
ဟော်တယ်ရောက်တော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနှင့် နိုင်နိုင်ရှိသော အထပ်သို့ တက်သွားပြီး သူ့မှာပါလာသည့်သော့ဖြင့် အသာဖွင့်ဝင်လိုက်လေသည်၊ အခန်းတခုလုံးလည်း မှောင်နေပြီး နိုင်နိုင်တယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ အသက်မှန်မှန်ရှုရင်း အိပ်ပျော်နေသည်ကို မှောင်ထဲမှာ မှန်းလို့ရလိုက်သည်၊ နိုင်နိုင့်ကိုလည်း စချင်တာနှင့် အသံမကြားအောင် ခြေဖျားထောက်ပြီး ကုတင်ဘေးကိုလာလိုက်သည်၊ မှောင်ထဲမှာပဲ လက်ဖြင့်အသာစမ်းပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ရအောင်ချွတ်လိုက်သည်၊ ထမိန်ကို ပေါင်ရင်းနားထိလှန်တင်ရင်း ဘာဂျာ ကောင်းကောင်းစပေးလိုက်သည်၊ သူ့စိတ်ထဲမှာ တခုခုတော့ မှားနေသည်ဟု ထင်မိသော်လည်း ဘာမှန်း သေခြာမသိ၊ စောက်ဖုတ်အနံ့နှင့် အရသာက သူ့ဦးနှောက်ကိုလည်း တွေးခေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်သည့်အလုပ်ကို ခန အနားယူခိုင်းထားလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊
ဘာမှ တွေးလို့မရ၊ လျှက်ကောင်းကောင်းနှင့် စောင့်ဖုတ်တပြင်လုံးနှင့် ပေါင်တွင်းသားလေးတွေပါ ရက်ပြစ်လိုက်မိသည်၊ စောက်စေ့လေးနေရာကို လျှာထိပ်ဖြင့်ထိုးထိုးဆွရင်းက စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းတွန့်တွန့်လေးတွေကိုပါ ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ နိုင်နီုင် သူ့ခေါင်းကိဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုပ်ကိုင်ရင်း တချီပြီးသွားခဲ့ရသည်။ ထိုအခါမှာတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လီးကြီးမှာလည်း မတရားကို တောင့်တင်း နေပြီ ဖြစ်ရာ သူ့ပုဆိုးကို ဖြည်ချရင်း နိုင်နိုင့် ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာ နေရာယူလိုက်သည်၊ နိုင်နိုင်တယောက် တချီသာပြီးသွားသည်ခုထိ အိပ်မက်လို့ထင်နေသေးလားမသိ အဲလောက်တောင် ဇိမ်ခံတဲ့ကောင်မလေး ကောင်းကောင်းလိုးထည့်လိုက်အုန်းမယ်ဟု စိတ်ကူးနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့လီးကြီးကို အဖုတ်ဝမှာ စမ်းတေ့ရင်း အသာဖိသွင်းချလိုက်လေတော့သည်။ ..အာ့..အီး..အမေ့… ထိုအခါကျမှ ညီးသံထွက်လာတော့သည်၊ ထိုညီးသံကို ကြားလိုက်ရသောခန ဦးအောင်အောင်ဆွေ နည်းနည်းကြောင်သွားသည်၊
ဟင် နိုင်နိုင့်အသံမဟုတ်ပါလား၊ သို့ပေမဲ့ သူ့လီးက အဖုတ်ထဲ ဒစ်မြုပ်နေပြီ၊ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ ဘယ်ယောက်ျားမှ နောက်ပြန်ဆုပ်မည်မထင်တော့၊ သူက ရှေ့ကိုသာတိုး၍ လီးတချောင်းလုံးဝင်အောင်ဖိသွင်းချလိုက်သည်။ ..ဖွတ်…ဗျိ… ..အား….. ညနေခင်း အိဖြူက စာရင်းတွေပိတ်နေသဖြင့် အလုပ်ရှုတ်နေပြီး နိုင်နိုင့်ကို ညကျမှ ငါနင့်လာခေါ်မယ်ဟု ပြောထားသဖြင့် နိုင်နိုင်ကလည်း အေးဆေးပါ ငါဒီနားဟိုနား ရှောက်သွားလိုက်အုန်းမယ်ဟု ပြောထားခဲ့လေသည်။ နိုင်နိုင်တယောက် ဟော်တယ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်က သူရောက်နေတယ်ကြား၍ လှမ်းဖုန်းဆက်ထားသည်၊ သူက ဖုန်းပြန်ခေါ်တော့ သူ့ကို လာခေါ်မည်၊ တခုခု ကျွေးမည် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမည်ဟု အစီအစဉ်ဆွဲသည်၊ အင်း အိဖြူကို နောက်မှ ပြောတော့မယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ လာခေါ်သော သူ့သူငယ်ချင်းနှင့်လိုက်သွားခဲ့လေသည်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ စားသောက်၊ စကားတွေပြောနှင့် တော်တော်ညနက်မှ သူ့သူငယ်ချင်းက ဟော်တယ်ရှေ့မှာ ပြန်လာချပေးသွားခဲ့လေသည်၊ နိုင်နိုင်လည်း မနက်ကျမှ အိဖြူကို ပြောပြတော့မည်ဟု တွေးကာ သူ့အခန်းရှိရာသို့တက်လာခဲ့လေသည်၊ သူ့အခန်းတံခါးကို သော့ဖွင့်ပြီး တံခါးကို တွန်းလိုက်သည်နှင့်အခန်းထဲမှ အသံက သူ့လက်တွေကို တုန့်ဆိုင်းသွားစေခဲ့သည်၊ ဟင်၊ ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူချက်ခြင်းတံခါးကို ပြန်စေ့လိုက်သည်၊ သို့သော်လည်း အဆုံးထိမပိတ်ပဲ နည်းနည်းလေးချန်ထားပြီး အသံကို နားနှင့်ကပ်နားထောင်လိုက်မိသည်၊ လိင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့အသံ၊ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ မမှားနိုင်၊ အရှိန်ရပြီး ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ၊ သူ့ခေါင်းထဲ မှာ ချက်ချင်း တွေးမိတာက သူ့အခန်းကိုလာကြမှာ သူ့သူငယ်ချင်း အိဖြူရယ်၊ သူ့လက်ရှိဘဲကြီး ဦးဦးအောင်ရယ်၊ တကယ်လို့သူတို့ နှစ်ယောက်သာဆိုရင်တော့ ၊ ယောက္ခထီးနဲ့ ချွေးမပဲ၊ အီး၊ အတွေးနဲ့ပင် နိုင်နိုင့်အဖုတ်လေး ဖောင်းသွားခဲ့ရသည်၊ အရည်လေးတောင် စို့လာရ၏၊
ဟင်း အိဖြူတကောင် အေးပီအေးရက်နဲ့၊ နောက်ဆုံးကျတော့ ဒီလိုပါလားဟု တွေးလိုက်မိလေသည်။ ဒါဆိုအခု သူဘာလုပ်ရမှာလည်း ၊နိုင်နိုင်တယောက် အခန်းတံခါးဝမှာရပ်ပြီးတွေဝေနေမိတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေနှင့် အိဖြူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်နှင့် ချစ်ပွဲဝင်နေတာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ သိနေကြပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ ရပ်လိုက်ကြဖို့လည်းမစဉ်းစား၊ အထူးသဖြင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၊ သူက အိဖြူခါးကလေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အရင်ကလည်း အိဖြူကို လုပ်လိုက်ရလျှင် ဆိုတာ ခနခနပေါ်လာဖူးသည်။ ကိုယ့်ချွေးမ မို့မကောင်းပါဘူးလေဟု စိတ်ကို ဖိနှိပ်ချိုးနှီမ်ထားခဲ့ရသည်။ အခုတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ချွေးမချောလေး အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ထည့်ကာ အားရပါးရလုပ်နေရပြီ မဟုတ်လား ၊ စိတ်က ပိုတောင် တက်ကြွလာသည်။ အိဖြူကလည်း သူ့ တသက်တာမှာ တချောင်းထဲသာ ကြုံဖူးသူ၊ ခုတော့ သူ့ယောက်ျားနှင့် အကိုင်အတွယ် မတူ၊ အတွေ့အကြုံလည်း ရင့်ကျက်နေသူ ယောက္ခမ ကြီး၏ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ ထူးကဲတဲ့ အရသာကို ခံစားနေရတာမို့ ဦးအောင်အောင်ဆွေရဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို တင်းတင်း ပြန်ဖက်ရင်း သူ့ဖင်ကလေးကို ကြွကာကြွကာ ပြန်ကော့ပေးနေမိလေပြီ။
ခုမှတော့ မထူးတော့ပြီ မလား။ အိဖြူတယောက် ကိုယ်လေး တုန်တက်ကာ ကာမ အရသာအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေကို တင်းတင်းဖက်ထားရင်းက သူ့လက်သည်းလေးတွေနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကျောပြင်ကို ကုတ်ခြစ်မိသည့်အပြင်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ပုခုံးကိုပါသူ့ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ဆွဲမိလိုက်လေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူအပြီးမှာ လေးငါးဆယ်ချက်ဆက်ညှောင့် ပေးလိုက်သေးသည်။ ပြီးမှ သူ၏ မာတင်းနေသေးသော လိင်တန်ကြီးကို အိဖြူ စောက်ခေါင်းတွင်းထဲမှာ စိမ်ထားရင်း၊ အိဖြူစောက်ခေါင်း အတွင်းသားများ၏ ရွစိရွစိလှုပ်ရှားနေသည်ကို အရသာခံနေမိသည်။ အိဖြူ ကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်းနေရာမှ ပျော့ကျသွားသည့်အခါ ဦးအောင်အောင်ဆွေ က အိဖြူ ဆံပင်လေးတွေကို မှောင်ထဲမှာပင်စမ်း၍ ပွတ်သတ်ပေးနေလေသည်။ အိဖြူတယောက်ကတော့ ရှက်လွန်းလို့ အသံလည်းမထွက်၊ ခေါင်းကိုသာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ရင်ဘတ်မှာ တိုးကပ်ဖိ ပြီးဖွက်ထားလေသည်။ အိဖြူ၏ အဖုတ်ထဲမှာ မာတင်းနေသေးသည့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လိင်ချောင်းကြီး အတွေ့အကြုံကလည်း အိဖြူအတွက် ထူးဆန်းနေသည်။ သူယောက်ျား ကိုမျိုးဆွေ ဆိုလျှင် တခါတလေ သူ အရှိန်ရတုန်း သုတ်ရည်တွေ ထွက်ပြီး ပြီးသွား ခါ လိင်တန်ကြီးပျော့ခွေ သွားတတ်သည်။
တခါတလေတော့လည်း ပြိုင်တူ ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လေ့ရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း အိဖြူပြီးသွားချိန် မှာ ကိုမျိုးဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးက မာဆဲ ရှိနေသည့်အချိန်မျိုး မကြုံဖူးခဲ့ခြေ။ ထို့ကြောင့်လည်း အိဖြူ ပြီးလို့ သူ့စောက်ခေါင်းတွင်းက အသားနုတွေက အထိမခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေချိန် မှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ မာတင်းကာ အကြောတွေ ဖုထ နေသည့်လိင်တန်ကြီးဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်တိုင်း အိဖြူခမျှာ တုံကနဲ ကြက်သည်းတွေပါ ထသွားရသည်။ ထိုအရသာမျိုးကို အခုမှ အိဖြူခံစားဖူးလိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း ကာမ အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားပြီးသည်နှင့် ထုံးစံအတိုင်း အသိစိတ်ဝင်လာတော့ ကိုယ့်ယောက်ျား အဖေ နှင့် လိင်ဆက်ဆံမိသည် ဆိုသည့်အသိက လည်း သူ့ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေသည်သာ မက၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းလည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ အဲလိုမျိုးလည်း တခါမှ မဖေါက်ပြန်ခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတော့ နောင်တ လည်းရမိသည်၊ အခု နေ ထပြီး ကိုယ့်ထမိန်၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တွေရှာပြန်ဝတ်ရမှာ ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ဘယ်လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမလည်း ၊မတွေးတတ်သဖြင့် အမှောင်ထဲမှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေကို အတင်းဖက်ထားမိခြင်းဖြစ်လေသည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လက်များက အိဖြူဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်ပေးနေရင်းက အောက်ကို ရွေ့လာပြီး အိဖြူ ဘလောက်အင်္ကျီနှိပ်ကြယ်သီး တွေကို တဖျောက်ဖျောက်ဖြုတ်လာတော့ အိဖြူ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားသည်။ ..အို..ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.. ပါးစပ်က အသံတိုးတိုးလေး ထွက်သွားပြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လက်တွေကို လှမ်းဖိတွန်းလိုက်မိသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူလက်ကလေးကို ပြန်ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့ကာ အိဖြူလည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်သည်။ သူ့အဖုတ်ထဲမှာ မာတောင် တောင့်တင်းနေသော လိင်ချောင်းကြီးကို စိမ်ထားခံရရင်းမှ လည်တိုင်လေးကို စိုစွတ်စွတ်အနမ်းခံလိုက်ရတော့ အိဖြူကြက်သည်းတွေထသွားရပြန်သည်။ နောက် တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လျှာကြီးက အိဖြူလည်တိုင်မှ တဆင့် မေးရိုးလေးတလျှောက်ရက်လာခဲ့သည်။ ခေါင်းအတင်းငုံ့ထားသော အိဖြူမျက်နှာလေးကို ဆွဲမကာ အိဖြူနူတ်ခမ်းအစုံကို ငုံစုပ်တာခံလိုက်ရသည်။ အိဖြူ၏ ခန္ဓာကိုယ်က အလိုလို တုန့်ပြန်လာပြီး ပါးစပ်လေးကို ဟ ပေးလိုက်မိသည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လျှာကြီးက အိဖြူပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာပြီး အိဖြူလျှာလေးကို ပွတ်တိုက်လိုက်တော့ ၊ ဘယ်လို အကြော တွေဆက်နေမှန်းမသိ၊ အိဖြူ ရဲ့ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားလေးတွေ ယားကျိကျိ ဖြစ်သွားရသည်။ ဘယ်က ဘယ်လို အိဖြူတယောက် ဦးအောင်အောင်ဆွေ လည်ဂုတ်ကို တွယ်ဖက် ကာ တုန်ပြန်အနမ်းတွေ ပေးနေမိသည်မသိ။ ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ ကျွမ်းကျင်လှသော လက်တွေက အိဖြူ ဘလောက်အကျီ ကြယ်သီးတင်မက အိဖြူကျောနောက်က ဘရာဇီယာဂျိတ်တွေကိုပါ ဖြုတ်ပြီးနေလေပြီ။ ဖောင်းအိတင်းနေသည့် အိဖြူ နိူ့လုံးလေးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ လက်ဖဝါးအောက်မှာ အဖျစ်အညှစ် အဆုပ်အနှယ် ခံနေရချိန်မှာ အိဖြူတယောက် အရှက်ကို မေ့နေလေပြီ၊သူ၏ တင်ပါးလေးကို ကော့ကာကော့ကာ ဖြင့်ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ ငြိမ်နေသော လိင်တန်ကြီးကို ဆွပေးမိလေသည်။
ထိုအခါကျမှ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အနမ်းကို မခွာပဲ၊ သူ့လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ကို အိဖြူတင်ပါးလုံး အောက်သို့ တဖက်ဆီ ထိုးသွင်းကာ ဆွဲမ ပြီး အားရပါးရဆောင့်လေတော့သည်။ ..စွတ်..ဖတ်..ဖတ်.. ..အ..အင့်….အီး……. အိဖြူဒီတခါတော့ ပါးစပ်မပိတ်နိုင်တော့ တအိအိ နှင့် ငြီးညူ မိလောက်အောင်ကို အရသာကောင်းကောင်းခံစားနေရလေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်း ဒီတခါတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်လေရာ များမကြာမှီပင် နှစ်ယောက်စလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်လိုက်ကြကာ ကာမအရသာအထွတ်အထိပ်သို့ ပြိုင်တူ ရောက်ရှိသွားကြလေတော့သည်။ အိဖြူ မှာ သူ့စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ တဒုတ်ဒုတ် ပန်းထုတ်လိုက်သော ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လရည်များကို နွေးကနဲ နွေးကနဲ နေအောင်ခံစားလိုက်ရလေတော့သည်။ ဒီတခါ တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ က အနားယူရင်း အိဖြူ ၏ မျက်နှာအနှံ့ကို အမြတ်တနိုးနမ်းရှုံ့လေရာ အိဖြူကလည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ပြန်လည်ဖက်ရမ်းနမ်းရှုံ့ပေးမိလေတော့သည်။
ဦးအောင်အောင်ဆွေက အခုမှ နိုင်နိုင့်ကို သတိရသွား၏ သို့သော်လည်း အိဖြူကို လုပ်ရတာ မဝသေးတော့ မပြန်စေချင်သေးသဖြင့်၊ အောက်ထပ်ဆင်းပြီး အကြံအဖန်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်လေသည်။ ..သမီး အိဖြူ ခနလေးနော် ဖေဖေ ပြန်လာခဲ့မယ် ဘယ်မှ မသွားနဲ့အုန်း.. အိဖြူက အသံမထွက် ခေါင်းကိုသာငြိမ့်ပြသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက လုံချည်ကောက်ဝတ်ပြီး အခန်းပြင်ကို ထွက်လာကာ အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့လေသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ နိုင်နိုင်ပြန်လာရင် အောက်ထပ်က ကောင်လေးတွေကို သူ့အခန်းပြောင်းပေးထားသည်ဟု ပြောရရင်ကောင်းမလား ဟု စဉ်းစားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဟော်တယ်လော်ဘီ တွင်း ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်၍ အခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားသော တီဗီထိုင်ကြည့်နေသည့် နိုင်နိုင့်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရ၏။
..ဟင် နိုင်လေး ပြန်ရောက်နေတယ်..ကြာပြီလား ရောက်နေတာ.. ..ဟင့် ..ဦးတို့ အရှိန် အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့.. ခိခိ..အဲဒါကြောင့် တံခါးပွင့်သွား တာတောင်မသိလိုက်ဘူးမလား.. ..အင်းဆောရီးပဲ နိုင်လေးရယ်.. ..အမ်မယ် ဆောရီးမနေပါနဲ့ ရပါတယ်..ဒါနဲ့ ဦးတို့က ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..ခစ်ခစ်. နိုင်က နိုင့်သူငယ်ချင်းကို ကျောင်းတုန်းက လိုရိုးရိုးကြီးလေးမေ မှတ်နေတာခစ်ခစ်.. ..နိုင်လေး ကို ဦးပြောရင်လည်းယုံပါ့မလား..အခုဟာက ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ… ဦးအောင်အောင်ဆွေက ဖြစ်ပျက်ပုံကို ရှင်းပြလိုက်သည်။ နိုင်နိုင် တယောက် နားထောင်ရင်း အဖုတ်မှ အရည်တွေတောင် စို့လာသည်။ သူနှင့် သူ့ပထွေးတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကိုတောင် မျက်စေ့ထဲပြန်ပေါ် လာခဲ့ရသည်။
…အင်း အဲတော့ အိဖြူက နိုင်ပြန်လာတာသိလား.. ..ဘယ်သိအုန်းမလဲ အခုအခန်းထဲမှာ အိပ်ကျန်ခဲ့တယ်.. ..နိုင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ ဦးပြန်တော့မှာလား.. ..အဟီး နိုင်လေး ဦးကို စိတ်မဆိုးဘူးမလား.. ..ဘာလို့ဆိုးရမှာလည်း.. ဦးကို နိုင်က ပိုင်တာမှ မဟုတ်တာ ..ခစ်ခစ်..နိုင်ဆိုလိုချင်တာက ဦးပြန်တော့မယ်ဆိုရင် နိုင်က အခုမှ ရောက်လာသလိုနဲ့အခန်းကိုပြန်လိုက်မယ်လေ..မသိချင်ယောင်ဆောင်မှာပေါ့. ..အဲဒါပြောမလို့ နိုင်လေးဦးကို စိတ်ဆိုးမလားဆိုတာ.. ဦး အိဖြူကို ချစ်လို့မဝသေးဘူး အခွင့်အရေးရတုန်းဆက်ချစ်ချင်လို့. ..ဟောတော့ ခစ်ခစ်..ဦးကတော့ လေ တကယ်ပဲ၊ ခစ်ခစ် ဒါဆိုနိုင်က ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ.. ..နိုင်လေးကို တခန်းပေးမယ်ကွာ ဒီညတော့ အဲဒီအခန်းမှာပဲ အိပ်လိုက်၊ ဦးက အိဖြူဆီပြန်သွားပြီးပြောလိုက်မယ်.. နိုင်လေးက ဟော်တယ်ရီဆက်ရှင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးမက်ဆေ့ထားခဲ့တယ်လို့.. ဒီညပြန်လာမအိပ်တော့ဘူး သူငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာအိပ်မယ်လို့… ..ဦးက တော်တော်ဥာဏ်ထွက်တယ်နော် ဒါမျိုးဆို ခစ်ခစ်..နိုင့်ကိုလည်းမမေ့ရဘူးနော် ဒါပဲ ဟင့်.. ထိုဖြင့် ဟော်တယ်မှာ အခန်းကိစ္စ နိုင်နိုင့်ကို စီစဉ်ပေးပြီးတာနှင့် ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် အိဖြူရှိရာသို့ အပြေးလေး ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်။
..ဖြူလေး.. ..အို့..ကိုရီး.. လန့်လိုက်တာ ကိုရီးကလည်း… ဘာလုပ်မလို့လဲ ဒီထဲမှာ… …ဖြူလေးကို သတိရလို့ပေါ့..မချစ်ရတာကြာပြီလေ… ..အို..မဖြစ်နိုင်တာ ..တော်ကြာ မေမေ ဝင်လာအုန်းမယ်.. ..မလာပါဘူး…အခုသူ ဘုရားရှစ်ခိုးနေတယ်..နောက် ပုတီးစိတ်အုန်းမှာ၊ နာရီဝက်လောက်ကတော့ အနည်းဆုံးပဲ… ..ဟင့်အင်း ကိုရီးရယ်…မီးလန့်တယ်…အို့..အဲဒီလက်ကြီးကလည်းနော်..ခက်တော့တာပဲ.. အထက်ပါစကားပြောသံများမှာ ယောက္ခထီးကြီး ဦးအောင်အောင်ဆွေနှင့် ချွေးမချောလေး အိဖြူသဇင် တို့ ၊ အိဖြူသဇင်၏ အိပ်ခန်းထဲ မှာ ပြောဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်၏ အမှတ်မထင် ပဲ နိုင်နိုင့် ဟော်တယ် အခန်းမှာ မှားယွင်းခဲ့ကြပြီးနောက် သောက်လို့ ငတ်မပြေနိုင်တဲ့ ဆားငံရည်ထက်ကောင်းသော အရာ ဆိုတော့ ဆက်ခါ ဆက်ခါမှားယွင်းခဲ့ကြလေသည်။
ယခင်က အိဖြူက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ဖေဖေ ဟုခေါ်ခဲ့သော်လည်း သူတို့ ချင်း တွေ့လျှင် ကိုရီး ဟုခေါ်ရန် ဦးအောင်အောင်ဆွေက ပြောထားသဖြင့် အိဖြူ က အသုံးအနူန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့လေသည်။ တကယ်တော့ နိုင်နိုင်ပြန်သွားပြီး နောက် အိဖြူက ဦးအောင်အောင်ဆွေကို ရှောင်နေခဲ့သော်လည်း၊ အံတိုနေပြီ ဖြစ်သော ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လက်မှ အိဖြူ လွတ်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေ။ နှစ်ယောက်ထည်း ရှိနေစေရန် အခွင့်အရေးများမရ ရအောင်ဖန်တီးကာ အိဖြူကို အရှက်ကုန် ပြီး ကာမအရသာ နှစ်သက်သွားသည် အထိ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင် ခဲ့လေရာ၊ ခုတော့ ကိုရီးနှင့် မီး ဘဝသို့ပင် ရောက်နေခဲ့ခြေပြီ။ သူတို့ နှစ်ယောက်၊ နောက်ဆုံးအကြိမ်၊ နွေရာသီ အပန်းဖြေအိမ်လေးသို့သွားရောက်ပြီး တနေ့လုံးအချစ်တလင်းခေါ် ခဲ့ကြသည်မှာ တပတ်လောက်ရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်၊ ထိုအခါပြီးတော့ အခုချိန်ထိ နှစ်ယောက်ထည်းတွေ့ဖို့ အခွင့်အရေးကလည်းမရ၊ အိမ်မှာလည်း နေ့တိုင်းတွေ့နေရပြီး၊ မြင်သာမြင် မကြင်ရဆိုတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက် အလွန်တင်းနေရသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း စနေနေ့တရက်၊ အိမ်မှာ ခိုင်းသည့်လူများအလစ်၊ သူ့မိန်းမ ဘုရားခန်း အဝင်၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့သားနှင့်ချွေးမ အိပ်ခန်းသို့ အသာဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ မနက်အိပ်ယာထ၊ ရေမိုးချိုးပြီး ကိုယ်မှာ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အကြီးကို ပတ်၊ ခေါင်းမှာလည်း လျှော်ထားသော ဆံပင်တွေကို ဆံပင်အခြောက်ခံစက်နဲ့ မှုတ်ပြီးကာစ မို့ ဖားယားချ လျှက် မှန်တင်ခုန်ရှေ့ထိုင်ကာ မျက်နှာလိုးရှင်း လေးပွတ်နေစဉ်၊ အနောက်မှာ ရုတ်တရက်ရောက်လာသော ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကြောင့် အိဖြူ တယောက်ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားရချင်းပင်။ ..ကိုရီး အခန်းတံခါး.. ..ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ကိုရီး ဂလန့်သေခြာချခဲ့တယ်.. ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူ၏ မခြောက်တခြောက် ဆံပင်တွေကို ဂုတ်နားလေးမှ ဖယ်ရင်းပုခုံးလေးကို ငုံ့ နမ်းလိုက်သည်။ အိဖြူယားလို့တချက်တွန့်သွားသည်။ သို့သော်လည်း ခေါင်းလေး လှည့်ကြည့်လာသော အိဖြူ ၏ နူတ်ခမ်းလေးတွေကို ငုံစုပ်တာ ခံလိုက်ရတော့ အိဖြူတယောက်လည်း ဦးအောင်အောင်ဆွေ ၏ လည်ဂုတ်ကို တွဲလဲခိုပြီး တုန့်ပြန်နမ်းလာတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူကို ဂျိုင်းနှစ်ဖက်အောက်မှ အသာ မလိုက်ရာ အိဖြူတယောက် မတ်တတ်ထလျှက်ပါလာတော့သည်၊ နှစ်ဦးသား တတ်မတ်တမော နမ်းနေကြစဉ်မှာပင် ဦးအောင်အောင်ဆွေက အိဖြူကိုယ်မှာ ပတ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်လေသည်။
အိဖြူ၏ ဖောင်းအိတင်းနေသော နို့နှစ်လုံးကို ဦးအောင်အောင်ဆွေ သူ့မျက်နှာကြီးဖြင့် ပွတ်သတ်ရင်း ထောင်မတ်လာသော နို့သီးခေါင်းကလေးများကို လည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေပေရာ အိဖြူခမျာ ဒူးများညွှတ်ခွေမကျသွားအောင် မနည်းထိန်း ၍ဦးအောင်အောင်ဆွေ၏ လည်ဂုတ်ကြီး ကို တွဲလွဲခိုထားရပေတော့သည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက နို့စို့လို့ဝသွားတော့ အိဖြူ မချီပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တော့သည်။ ..ဖြူလေး အဲလို ရေချိုးပြီးကာစ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ် ကလေးကို အကိုရီးက တကိုယ်လုံးရက်ပြစ်ချင်တာကွ.. .ဟင့်..အချိန် သိပ်မရှိဘူးနော် ကိုရီး၊ မီးလန့်တယ်၊ တော်တော် မေမေ တံခါးလာခေါက်နေရင် ပြဿနာတက်နေမယ်.. ..အင်းပါကွာ ဖြူလေး အဖုတ်လေး လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်လေးကို ပဲ ရက်သွားတော့မယ် ဒါဆိုလည်း… ဒါကလည်းတကယ်တော့ အပြောပါ၊ ဦးအောင်အောင်ဆွေတယောက် အိဖြူ အဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ရက်ပြီးချိန်မှာ အိဖြူက ဒီတိုင်းဘယ်ပြန်လွတ်တော့မည်နည်း။ သူ့လက်ကလေးတွေက ဦးအောင်အောင်ဆွေ ကောင်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်နေပြီး သူ့ဟာလေးထဲ အတင်းထည့်ခိုင်းနေသည်။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက လည်း အရင်စုပ်ပေးမှ ထည့်ပေးမည်ဟု ဆိုသဖြင့် ကုတင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်ပြီး ကုန်းစုပ်ပေးရှာသည်။ လိုက်လည်းလိုက်သည့် ချွေးမနှင့် ယောက္ခထီး။
နောက်ဆုံးတော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေ တယောက်၊ သူ့သားလင်မယားအိပ်သည့် ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ သူ့ချွေးမချောလေး အိဖြူသဇင်ကို လေးဘက်ထောက် ခိုင်းကာ အနောက်မှ လုပ် ရင်း ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် သို့ နှစ်ဦးသား ရောက်ရှိသွားရလေတော့သည်။ …ကိုရီး… ဒုက္ခ တော့ရောက်ကုန်ပြီထင်တယ်.. …ဟင် ဘာဖြစ်လို့လည်း ဖြူလေး… …မီး မှာ ဟိုဟာ ဒီလ မလာဘူး နောက်ကျနေတယ်…. ..ဟင် ဟုတ်လား၊ သေခြာရဲ့လား ဖြူလေးရယ်… ..သေခြာတယ် ထင်တာပဲ ကိုရီး မသေခြာလည်းပဲ ဟုတ်ခဲ့ရင် ဆိုတာ ပြောလို့ရမလား..မီးအရမ်းကြောက်တာပဲ…ဟင့်ဟင့်..ရွှတ်..အီးးးး ဟင့်…ဟင့်.. ..အို ဖြူလေးက လည်း ငိုမနေပါနဲ့ ..ကိုရီး စဉ်းစားလိုက်ပါအုန်းမယ်…. ချန်ဂီ လေဆိပ်၊ စကာင်္ပူ။ ..ဟော ..အချစ်ကလေး ..မတွေ့တာတောင်ကြာလို့..လှလိုက်တာကွာ…. ..အင်း ..ကိုရောဘဲ တခါထဲ စလုံးနဲ့တည့်လို့ထင်တယ် ဝလို့ ဖြူလို့၊ ဗိုက်တောင်နည်းနည်းရွဲလာတယ်၊ အိုဗာရှိတ်ဖြစ်နေပြီနော် ဟင်း… ..ဟာကွာ အချစ်ကလည်း ခုတလော အစားကောင်းနေလို့ပါ၊ ဟဲဟဲ..ခုလည်း ချစ်ကလေး ရောက်တုန်း ရောက်လည်မယ်ဆို ပြီး ခွင့်ယူထားတယ်၊ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ အစားတွေ ပဲစားဖို့ကိန်းမြင်တယ်၊ အဟစ်ဟစ်.. ..ဖြူက မလည်ချင်ပါဘူး ကိုနဲ့တွေ့ရအောင်ပဲလာခဲ့တာ၊ အခုတလော အလုပ်ကလည်းနည်းနည်းပါး၊ အဖေကလည်း နင့်ယောက်ျားမတွေ့ရတာကြာပြီ သွားလည်ပါလားတဲ့ ငါတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
မေမေကလည်း အင်း သူပြန်မလာတာကြာပြီ နင်လိုက်သွားအုန်းတဲ့ ခစ်ခစ်၊ သူ့သားတောင်သူ စိတ်မချလို့ ချွေးမကို အတင်းလွတ်နေတာ.. …ဟဲဟဲ ကိုကလည်းပြန်လာချင်တာပေါ့ကွာ၊ အလုပ်က ခွင့်အကြာကြီးယူမရလို့ တပတ်လောက်နဲ့လည်း ပြန်မလာချင်ဘူးလေ၊ အခု အချစ်လာတော့ ကိုယ်က တပတ်လောက်ခွင့်ယူမယ် အချစ်က တလလောက်နေပြီးမှ ပြန်၊ ဟုတ်လား.. စင်္ကာပူ က တကယ်တော့ နှစ်ရက်လောက်လည်ပြီးရင် သွားစရာမရှိတော့ပြီ၊ မျိုးဆွေတယောက်ကတော့ ငတ်သမျှ ကို အတိုးချစားလေတော့သည်။ အိဖြူလည်း အကြိုက်တွေ့ နေရသည်။ ကိုမျိုးဆွေတယောက် စလုံးမှာ နေတာ ကြာတော့ လိင်ကိစ္စ မှာလည်း တော်တော်လေး တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရသည်။ အင်တာနက်ထဲ တချိန်လုံးသွားနေလို့လားမသိ။ တခါတလေ အိဖြူနှင့် အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီးရင်တောင် ခနတဖြုတ်ကွန်ပြူတာရှေ့သွားထိုင်ပြီး ကီးဘုတ် တဂျောက်ဂျောက်နဲ့ ရိုက်နေတတ်သည်။ အိဖြူကတော့ မစပ်စုချင်သလိုပင်၊သိပ်လည်းစိတ်တော့မဝင်စား။
သူ ရာသီလာနောက်ကျသည့်ကိစ္စလေး အစဉ်ပြေသွားတာကို ပင် စိတ်ချမ်းသာနေသည်။ တညတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူနှင့်ကိုမျိုးဆွေတို့ အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်သွားတော့ ရေဆေးသန့်စင်ပြီးသူက ကုတင်ပေါ်တက် စောင်အောက်ဝင်တုန်း ကိုမျိုးဆွေက ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ တဂျောက်ဂျောက်လုပ်နေသည်။ ခနနေတော့ ကိုမျိုးဆွေ အိမ်သာထဲ ဝင်သွားတော့ ကွန်ပြူတာ ဝင်းဒိုးကို သေးအောင်လုပ်ထားခဲ့သည်။ အိဖြူက အသာထပြီး ဝင်းဒိုးကို ကြီးကြည့်လိုက်သည်။ ဗမာစာလုံးတွေ အတန်းလိုက်အတန်းလိုက်တက်တက်လာတာတွေ့ရသည်၊ အင်း ချပ်ဆိုတာပဲနေမှာပဲ၊ ကြည့်ရတာ လူတွေ နဲ့စကားပြောနေပုံပဲ။ နာမည်တွေကလည်း ဘာနာမည်တွေလည်းမသိဘူး၊ တခုက တရုပ်ဖုန်းနာမည်။ ညီဟွဟွေ ဆိုလား၊ စီးခရက်ဘွိုင်းတဲ့၊ နောက်တယောက်က မေချစ်သူမောင် ဆိုလား၊ဟင် ကောင်မလေးများလား၊ မောင်ဆိုတော့ ယောက်ျားလေးနေမှာပေါ့။ ဟင်၊ ယောက်ျားတွေနဲ့ ဘာလို့ ကိုမျိုးဆွေက ချပ်လုပ်နေတာလည်း။ အိဖြူကြည့်နေတုန်းစာတန်းလေးတွေတက်လာသည်။
..ကိုအိုဗာရှိသေးလား…. ..ကိုအိုဗာ အမြန်လာပါ..ကျနော်လိုင်းမကျခင်.. အင်း ဘာတွေလည်းမသိပါဘူး၊ အိဖြူ ဝင်းဒိုးကို ခုနက ကိုမျိုးဆွေထားခဲ့သလို ပြန်ထားလိုက်သည်။ နောက်တော့ ကုတင်ပေါ်ပြန်လှဲကာ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံအိပ်နေလိုက်တော့သည်။ အိဖြူ တို့ ဆီက ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ နိုင်နိုင်တယောက်၊ ရထားပေါ်မှာ အိပ်စင်ပါသည့် အတန်းမှ စီးလာခဲ့သည်။ သူ့ နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အမျိုးသားကြီးတဦး၊ သူ့ဘေးမှာ က တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတဦးလိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ ကောင်ကလေးမှာ မောင်စောကြည် ဟုခေါ်ပြီး စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်နေ သူဖြစ်လေသည်။ အမျိုးသားကြီးကတော့ ပုတီးအလုံးကြီး များပါသော စိတ်ပုတီးကြီးကို သာ မျက်လုံးပိတ်ပြီး စိတ်နေ လေသည်။ မောင်စောကြည် နှင့် နိုင်နိုင် တို့ကတော့ ရထားထွက်ပြီး တနာရီလောက်မှာပင် ခင်မင်သွားကြတော့သည်။ နိုင်နိုင်က ဘူတာရုံတွေရောက်လျှင် စားစရာ တိုလီမှုတ်စလေး တွေကို ဝယ် မောင်စောကြည် ကို ပါ မျှကျွေး စကားတွေတပြောပြောနှင့်၊ လိုက်လာခဲ့ကြလေသည်။
ညနေစောင်းပြီးမှောင်လာတော့ အိပ်ဖို့ရာပြင်ကြရလေသည်။ အပေါ်ထပ်မှ ဆွဲချရသော အိပ်စင်ကို ဦးလေးကြီး အတွက်ပေးလိုက်ရပြီး သူတို့ထိုင်နေသော ခုံများကို ဆွဲဆန့်လိုက်သဖြင့် အိပ်ယာဖြစ်သွားသော နေရာတွင် နိုင်နိုင် နှင့် မောင်စောကြည်တို့ နေရာယူကြရသည်။ နိုင်နိုင်ကတော့ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီး လိင်ကိစ္စ မှာ တက်ကြွသူ တဦးမို့၊ ယခုလို တစိမ်းကောင်လေး နှင့် ကပ်ရက် အိပ်ရမှာနှင့်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အကွက်တို့ကို မြင်မိပြီး ရင်ခုံလာရသည်။ သို့သော်လည်း သူ့လို အသက်ကြီးကြီး အိမ်ထောင်သည် မိန်းမ ကို မောင်စောကြည်လို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလေးက စိတ်ဝင်စားပါ့မလားဟု တွေးရင်း ညနေစောင်းကထဲက မသိမသာ လေ့လာနေမိသည်။ မောင်စောကြည် ၏ တချက်တချက် ခိုးကြည့်သော မျက်လုံးတွေက သူ့ ရင်သား တွေ ပေါင်လုံးတွေစီ ရောက်ရောက်လာ တာကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟု တွေးထားလိုက်သည်။
သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ညအိပ်ယာဝင်တော့ အောက်ခံမပါ ပဲ ထမိန်တထပ်ထည်း ဝတ်၊ အပေါ်ကလည်း တီရှပ်ကို အောက်က ဘရာဇိယာမခံပဲ ဝတ် ထားလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ရထား လှုပ်တော့ အရမ်းခုံနေမှာ စိုးသဖြင့် အပေါ်က ဆွယ်တာတထည်ထပ်ဝတ်ထားလိုက်ရသည်။ …ရထားက အရမ်းခုံ တာပဲနော်၊ ငါတော့ မိုးလင်းရင် အိပ်ယာပေါ်မှာတောင် ရှိပါတော့မလားမသိဘူး၊ အောက်ပြုကျပြီ ခစ်ခစ်… ..ဟာ အန်တီက လည်း ကျနော်က ပိုဆိုးသေးတယ်၊ အဆောင်အိပ်ခန်းထဲမှာ အိပ်ရင်တောင် မနက်ကျရင် ခေါင်းက ခြေရင်းဘက်ရောက်နေတတ်တာ၊ အဟီး..ကျနော် ခြေထောက်နဲ့ အန်တီ့ကို ကန်မိရင် ကန်တော့နော် အဟားးး ကြို ကန်တော့ထားတာ.. …အောင်မလေးကွယ် ငါကလည်း အိပ်လိုက်ရင် တုံး ကနဲပဲ၊ ဆင်နင်းသွားရင်တောင် နိုးချင်မှ နိုးမှာ၊ မင်းကန်တာလောက်ကတော့ အပျော့ပေါ့… …ဟားဟား..အဲဒါကတော့ ကျနော့်အတိုင်းပဲ..အဟီး… ကောင်လေးက လည်း စကားခေါ်ထားတဲ့ပုံက မဆိုးပါလား၊ ငလည်လေးပဲ လို့ နိုင်နိုင့်စိတ်ထဲ တွေးနေမိသည်။ တကယ်အိပ်ယာဝင်ကြတော့ တယောက်နှင့်တယောက်က တတောင်လောက်တော့ ကွာဝေးပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း ရထားကပဲ တဝုန်းဝုန်းခုံလို့လား မောင်စောကြည်ကပဲ တမင်ရွေ့လာတာလားမသိ တနာရီလောက်မှာ သူတို့ နှစ်ဦး ကိုယ်ချင်းကပ်လို့ ခြားထဲမှာ စောင်နှစ်ခုသာ ခြားတော့သည်။
နိုင်နိုင်က မောင်စောကြည်ဘက်ကို ကျောပေးကာ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေလိုက်သည်။ သူ့တင်ပါးပေါ် မောင်စောကြည်လက်ဖဝါးတွေ ရောက်လာတာ သိလိုက်ပြီး ရင်ထဲမှာ ပျော်သွားသည်၊ အဟိ လာပြီ လာပြီ ပေါ့။ မောင်စောကြည်က လည်း လူသာငယ်သည်၊ ပညာက ခေသူမဟုတ် ဆိုသူပေတည်း။ လူပျို ပေါက်စဖြစ်ကထည်းက သူတို့ အိမ်နီးချင်း မုဆိုးမ တယောက်၏ ပညာပေးမှုကြောင့် သာအိ တစိုစို ဖြစ်နေခဲ့ရပြီး၊ အမျိုးသမီးကြီးတွေ ကို စိတ်ပိုလာနေခဲ့ရသူဖြစ်ရုံသာမက လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံကလည်း မနည်းတော့ပြီ။ သူ၏ အတွေ့အကြုံများကို ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် သွားရည်တမျှားမျှား ကျအောင် အဆောင်က သူငယ်ချင်းများရှေ့တွင် ဖေါက်သည်ချတတ် သည်မှာလည်း သူ့ဝါသနာ။ နိုင်နိုင့်ကို မြင်ကထဲက ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်ဆိုတာ သူတွက်ထားပြီးသား၊ ယောက်ျားက ဗိုလ်မူး ရှေ့တန်းမှာ အနေများသည်ဆိုတော့ ပိုသေခြာသည်။ တောင်းတနေမှာပဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါကလည်း အန္တရာယ် များသည်။ အသွားမတော်တလုပ်ဆိုသလို၊ ဒုက္ခ ရောက်မှာလည်းစိုးသည်။ ထုံးစံအတိုင်း စကြည့်လို့ အခြေအနေမကောင်းရင် ရှေ့ဆက်မတိုးနဲ့ပေါ့။ ဒါက မောင်စောကြည်ရဲ့ အထာ။ မောင်စောကြည်လက်ဖဝါးက စောင်အောက်က အသာလျိုဝင်ပြီး နိုင်နိုင့် တင်ပါးလုံးလုံးလေးပေါ်တင်လိုက်ပြီး မသိမသာ ပွတ်ပေးနေတာကို ငြိမ်ခံနေကထဲက မောင်စောကြည်က မီးစိမ်းကို တွေ့နေပြီ၊ သူ့လက်ဖဝါးတွေကို တင်ပါးပေါ်မှ အရှေ့ဘက် ဘိုက်သားလေးပေါ်ရွှေ့လိုက်သည်။ နိုင်နိုင့်ဖင်လေးပိုကောက်လာသည်၊ သူ၏ မာတောင်နေသော ကောင်ကြီးနှင့် ထောက်မိနေပြီ။ မောင်စောကြည်က နိုင်နိုင့်ဗိုက်သားလေးတွေကို တီရှပ်အောက်မှ ပွတ်နေရင်း အပေါ်ဖက်သို့တက်လာတော့။
ဘရာဇီယာဝတ်မထားသော နို့ကြီးတွေကို သွားစမ်းမိသည်။ ဟိုက်။ ထင်တာထက်တောင် ဟော့နေပါလား၊ မောင်စောကြည် ပေါ်တင်ပဲ ကြမ်းတော့သည်။ သူ့လက်ဖဝါးတွေနှင့် နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နှယ်၊ ထောင်မတ်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လှိမ့်ချေ ပွတ်သတ် လုပ်ပေးနေလိုက်သည်။ နောက် သူတို့ ခြုံနေသော စောင်နှစ်ထည်ကို တထည်ထည်း နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုးကတော့ ခါးမှာ ကွင်းလုံးတက်နေပြီ နိုင်နိုင့် ထမိန်ကိုသာ နိုင်နိုင့်တင်ပါးကျော်အောင် ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ အေးစက်ပေမဲ့ အိနေသည့် နိုင်နိုင့် ဖင်လုံးကြီးကြားသို့ မောင်စောကြည်၏ ပူနွေးနွေး ဒုတ်ကြီး လျှိုဝင်သွားသည်။ …ဟင့်..အင်းးးးး..အင်း…. နိုင်နိုင့်ဆီက ငြီးသံလေးထွက်လာခဲ့သည်။ မောင်စောကြည်က သူ့ဒူးခေါင်းတဘက်ကို နိုင်နိုင့်ပေါင်လုံးနှစ်ခုကြားကို ထိုးထည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေစေရန်နိုင်နိုင်က လည်း သူ့ခြေထောက်တဖက်ကို အသာ မြှောက်ပေးလိုက်သည်။ မောင်စောကြည်က ကိုယ်လုံးကို အောက်အနည်းငယ်လျှောချပြီး ဖင်ကို ကော့လိုက်တော့ သူ့လီးထိပ်ကြီးက နိုင်နိုင် ၏ အရည်ရွဲနေပြီဖြစ်သော စောက်ဖုတ်ဝသို့ လာထိတော့သည်။ နိုင်နိုင်က အနောက်ကို ပိုကော့ပေး၊ မောင်စောကြည်ကလည်း အပေါ်ကို ကော့ထိုးလိုက်တော့ မောင်စောကြည်လီးကြီးက နွေးထွေးနူးညံ့ လှသော နိုင်နိုင့်စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်သွားတော့သည်။
နှစ်ယောက်စလုံးက အတွေ့အကြုံရှိကြသူများမို့ ခနလေး ဖြင့် သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ တပေါင်ကျော်ပုံစံဖြင့် လိုးနေကြလေပြီ၊ နိုင်နိုင်က သူ့လက်ကို နောက်ပြစ်ပြီး မောင်စောကြည်၏ ဖင်ကို အတင်းဆွဲပြီး သူ့ကိုယ်ထဲ မောင်စောကြည်လီးကြီး ဝင်နိုင်သမျှဝင်အောင် လုပ်ပေးလေသည်။ ထိုပုံစံအတိုင်းလုပ်နေရင်းမှ မောင်စောကြည်က အားမရလာတော့ သူ့လီးကြီးကို ပြန်ချွတ်ပြီး နိုင်နိုင့်ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းကာ ပေါင်နှစ်လုံးကြားဝင်၊ လှေကြီးထိုးပုံနှင့်လုပ်တော့သည်၊ ရထား ခုံဆောင့်နေတာကလည်း သူတို့ အတွက် အလွန်အဆင်ပြေနေတော့သည်။ နိုင်နိုင့်နူတ်ခမ်းဖူးဖူးတွေကို မောင်စောကြည်က ငုံစုပ်တော့ နိုင်နိုင်က လည်း သူ့လျှာကလေး မောင်စောကြည်ပါးစပ်ထဲ ပြန်ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ အရှိန်တွေရလာကြတော့ သူတို့ နှစ်ယောက် စလုံး အငမ်းမရ တယောက်ကို တယောက် ဆွဲဖက်လိုးနေကြရင်း ကာမ အရသာအထွတ်အထိပ်ကို ပထမဆုံးရောက်သွားကြရတော့သည်။
…အား…ကောင်းလိုက်တာ အန်တီရယ်…. ..ဟင်း..မင်း လူဆိုးလေးနော်..သူများမှာ ယောက်ျားရှိပါတယ် ဆိုတာကိုတောင် အတင်းတက်လုပ်တယ်၊ ခါထဲ.. ..အဟိ..အန်တီက လည်း မကြိုက်တာကြနေတာပဲ၊ ဟီးဟီး… ခနလေးပါပဲ၊ နောက်တချီ ပြန်စကြပြန်တော့သည်။ နိုင်နိုင် ဘူတာကြီးမှာ မခွဲချင်ခွဲချင်နှင့် မောင်စောကြည်လေး နဲ့ ခွဲလာခဲ့ရသည်။ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ဖလှယ်၊ ပြီး နောက် အခွင့်အရေးရလျှင် ဆုံကြစို့ဟု၊ ပြောလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့နေသော အရာရှိရိပ်သာ သို့ရောက်တော့ တညလုံး ရထားကလည်းခုံ၊ မောင်စောကြည်နဲ့ လည်းကဲထားသဖြင့် ကိုယ်တွေလက်တွေနာ၊ အိပ်ချင်လာသဖြင့် အဝတ်တောင်မလှဲနိုင်ပဲ အိပ်ပျော်သွားရသည်။ တရေးနိုးလာတော့ အိမ်မှာလည်း တယောက်ထဲ ဆိုတော့ ရင်ထဲ ဟာတာတာဖြင့် ပျင်း သလိုလို ၊ ရှော့ပင်ထွက်ရမှာတောင် စိတ်မပါတော့သဖြင့်အိပ်ယာထဲ လှဲနေတုန်း၊ ..ကလင်း… ဖုန်းကမြည်လာလို့ကောက်ကိုင်လိုက်တော့။
..နိုင်လေးလား… ..ဟင် ဖေကြီးလား ခုဘယ်မှာလည်း.. …ဖေကြီး တို့အသိအိမ်တအိမ်မှာ မြို့ကို ရောက်တယ်၊ သမီးတို့ဆီရောက်တော့ ခရီးထွက်သွားတယ်တဲ့ ဒီနေ့လောက်ပြန်ရောက်မလားမသိဘူး ဆိုတာနဲ့ ဖေကြီးအသိတယောက်အိမ်သွားတည်းနေတာ.. ..အင် ဒါဆိုရင် အတော်ပဲ မီးဆီမှာလာတည်းတော့ ဒီမှာတယောက်ထည်းပျင်းနေတာ … ..အော် မောင်အောင်နိုင် ကရောဘယ်သွားလို့လဲ.. ..သူက အထူးစစ်ဆင်ရေးရှိလို့လေ၊ ဖေကြီးရဲ့ ခုမီးက အိဖြူတို့ဆီသွားလည်ပြီးပြန်လာတာ၊ ခုလာခဲ့လိပ်စာပြောလိုက် မီးကားလွတ်လိုက်မယ်..မေမေရော နေကောင်းလား… သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခရီးထွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင် အိမ်မှာတယောက်ယောက်ကျန်မှ ရမည်ဆိုတာ နိုင်နိုင်က သိထားသည်။ မကြာခင်မှာပင် သူ့ကို အကြိုလွှတ်လိုက်သော ကားဖြင့် ဦးချစ်ဆွေ ရောက်ချလာသည်။ ဦးချစ်ဆွေ အထုပ်အပိုးတွေကို ဒရိုင်ဗာ တပ်သားလေးက ကူသယ် အခန်းတွင်း ချပေးပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ နိုင်နိုင်က တံခါးမ ကိုပိတ်ပြီး လော့ချနေချိန်မှာပင် ဦးချစ်ဆွေက နိုင်နိုင့်အနောက်မှ သိုင်းဖက် ပြီး ဂုတ်လေးကို ငုံနမ်းလိုက်လေသည်။
..နိုင်လေးက ပိုပြီးလှလာ တောင့်လာလိုက်တာကွာ….ချစ်စရာကြီး…. ..ဟွန့် ဖေကြီးကလည်း မာမာတောင်တောင် ပဲမဟုတ်လား ခစ်ခစ်… နိုင်နိုင်က သူ့ဖင်ကြီးကို လာထောက်နေသည့် ဦးချစ်ဆွေ၏ လီးမာမာကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ပင်လှမ်းဆုပ်ကိုင် ရင်းပွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ နိုင်နိုင်က တံခါးပိတ်အပြီး ဦးချစ်ဆွေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် လှည့်လိုက်သည့်အချိန်မှာတော့ ဦးချစ်ဆွေက သူ့ပုဆိုးကို ဖြည်ချလိုက်လို့ ကြမ်းပေါ်မှာ ကွင်းလိုက်ပုံနေလေပြီ။ သူ့ကောင်ကြီးက တော့ သူ့ဆီးခုံမှ လေးဆယ့်ငါးဒီဂရီ ထောင်မတ်လို့ နိုင်နိုင့်ရင်ဘတ်ကို အမြှောက်နှင့် ချိန်ထားသလိုပင်။ ..ဟွန့်ဖေကြီးကလည်း ရောက်တာနဲ့ တခါထဲ တန်းပြီးတော့….တန်းနေတာပဲ ခစ်ခစ်.. နိုင်နိုင်က လည်းပြောသာပြောနေတာပါ သူ့လက်တွေက အလိုလို သူနှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ဦးချစ်ဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးကို သူ့လက်ခလေးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးရင်းက ဦးချစ်ဆွေရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်လေသည်။ နိုင်နိုင့်လျှာကလေးက ဦးချစ်ဆွေ၏ ဒစ်ဖျားကို အသာရက်လိုက်ပြီးမှ နူတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာကို ဟပေးလိုက်တော့ ဦးချစ်ဆွေက ရှေ့ကို ခြေတဖဝါးစာရွှေ့ပြီး နိုင်နိုင့် အာခံတွင်းထဲ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ နွေးထွေး နုးညံ့သော နိုင်နိုင့်အာခံတွင်းလေးက ဦးချစ်ဆွေ၏ လိင်တန်ကြီးကို စုပ်ယူလိုက်သော အခါမှာတော့ ဦးချစ်ဆွေခမျာ ဒူးများပင် ချောင်ချင်သလိုဖြစ်သွားရသည်။
ဦးချစ်ဆွေမှာ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်လို့ နိုင်နိုင့် ဆံပင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖင်ကြီးကော့ကာကော့ကာ ဖြင့် သူ့လိင်ချောင်းကြီးကို နိုင်နိုင့်ပါးစပ်တွင်းသို့ ထိုးသွင်းနေမိလေတော့သည်။ နိုင်နိုင်ကလည်း သူ့ဦးဦးချစ် အကြောင်းသိပြီးသားမို့ ဦးဦးချစ် အတန်ကြီးအာဂေါင်မထိုးမိစေရန် လိင်တန်အရင်းကို သူ့ကလေးနှင့် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့နူတ်ခမ်းထူထူ လေးကိုလည်းစေ့ပေးထားလိုက်လေသည်။ ဦးချစ်ဆွေကတော့ အောင်းထားရတာလည်းကြာ၊ စုတ်အားလည်းကောင်းလှသော နိုင်နိုင့်အိမ်ရှေ့တံခါးဝ အနီးမှာပင်၊ အမှုတ်ခံနေရတော့ ကြာကြာမထိန်းနိုင်၊ ခနလေးဖြင့် သုတ်ရည်တွေကို နိုင်နိုင့်လည်ချောင်းတွင်း တဒုတ်ဒုတ်ပန်းထုတ်ပစ်နေမိလေတော့သည်။ ..ကလင်းးးးးးးးးးးးးးး… စောစောစီးစီး ထမြည်လာသော တယ်လီဖုန်းကြောင့် အိပ်ယာမှ လန့်နိုးလာသော နိုင်နိုင်တယောက် ကယောင်ကတမ်းနှင့် လက်က ကုတင်ဘေးက စားပွဲလေးပေါ်လက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်သည်။ သူလက်ထဲဖုံးရောက်လာမှ သတိရပြီး ကမန်းကတန်း စကားပြောခွက်နေရာကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့်ဖုံးလိုက်မိသည်။ နောက် သူ့ဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသော ဦးဦးချစ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူလည်း ဖုံးသံကြောင့် နိုးသွားဟန်တူသည်၊ မျက်လုံးပွင့်လို့ နိုင်နိုင့်ကို ကြည့်နေသည်။
နိုင်နိုင်က အသံမထွက်နဲ့ ဟု သူပါးစပ်မှာ လက်ညိုးထောင်ပြလိုက် တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ ..ဟယ်လို… ..အန်တီ နိုင်နိုင်ကျော့နွယ် လား… ..ဟဲ့မောင်စောကြည်၊ စောစောစီးစီးကွယ်၊ လန့်တောင်သွားတယ် ဖုံးသံက.. ..ဟင်မစောတော့ပါဘူးအန်တီရဲ့ အန်တီက အိပ်ယာမထသေးတာလား ဆောရီးပဲနော်.. ခုမှ နိုင်နိုင်လည်း နာရီကို လှမ်းကြည့်မိသည်၊ ဟောတော့ မွန်းတောင်တည့်တော့မယ်။ ခစ်၊ ညက ဦးဦးချစ်နဲ့ မတွေ့ရတာ ကြာလို့ ကဲလိုက်ကြတာ ၊ ဦးဦးချစ်ကလည်း အနားကို မပေးဘူးလေ၊ မနက် အာရုံတက်လောက်မှ အိပ်မောကျသွားတာကိုး။ အဲဒါကြောင့် မနိုးကြတာ၊ ခု ဖုံးလာမှ ပဲနိုးတော့တာကိုး။ ..အော်အေး ဟုတ်သားပဲ၊ ညက အိပ်ယာဝင်တာ နောက်ကျသွားလို့ မနိုးဘူးဖြစ်သွားတာ ခစ်ခစ်၊ ခုတော့ ထရတော့မှာပေါ့၊ ကဲပြော မောင်စောကြည် ဘာထူးလည်း.. နိုင်နိုင် က ကုတင်ခေါင်းရင်းကို ခပ်လျှောလျှောလေး ကျောမှီပြီး ဖုံးပြောနေသည်။
ညအိပ်ယာဝင်ကထည်းက ကိုယ်လုံးတီးမို့ နို့ကြီး နှစ်လုံးက ပြတင်းပေါက် မှန်ကို ဖြတ် ဝင်လာတဲ့ နေရောင် အောက်မှာ ဝင်းနေတယ်။ ဦးချစ်ဆွေက အသာအိပ်ယာပေါ်မှာ တတောင်ထောက်လို့ နိုင့်နိုင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လာစို့သည်။ နိုင်နိုင်က ဖုံးပြောနေရင်းက ဦးချစ်ဆွေ လက်မောင်း ကို လက်သည်းနဲ့ ဆိပ်လိုက်ရင်း မျက်စောင်းလေးပါ တချက်ထိုးလိုက်သည်။ ခုထိမဝသေးဘူးလား ဆိုသည့်သဘော။ ..အန်တီလား၊ အင်း ဘာမှ လုပ်စရာမရှိပါဘူး ကွယ်၊ ခရီးပန်းလာလို့ အိမ်မှာ ပဲ နားနေတာ.. ဦးချစ်ဆွေလက်က နိုင်နိုင့်ပေါင်ကြားက အဖုတ်လေးဆီ ရောက်လာပြန်တယ်၊ အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးတွေ စောက်စေ့လေး တွေကို ဆွနေပြန်တယ်။ ..အင် အန်တီ့ဆီ လာလည်မို့..ဒီနေ့ကတော့… နိုင်နိုင်က အကြောင်းတခုခု ပြပြီးငြင်းမလို့ ကြံနေတုန်းသူ့ကို လက်နဲ့တို့လိုက်ပြီး လက်မထောင်ပြနေတဲ့ ဦးချစ်ဆွေကို တွေ့လိုက်လို့ ဖုန်းစကားပြောခွက်ကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ ဖုန်းပြီး။ ..ဘာလည်း ဖေကြီး ဘာပြောမလို့လဲ.. ..ခေါ်လိုက် အိမ်ကို..ဖေကြီး ချောင်းချင်လို့.. ..အင် ဖေကြီးက လည်း .. နိုင်နိုင်က မျက်မှောင်လေးတချက်တွန့်ကာ ပြန်မေးလိုက်ရင်းမှ ၊ တွေးလိုက်မိပြီး ကြက်သည်းပါထသွားသည်။
..တကယ်လားဖေကြီး.. ဦးချစ်ဆွေ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာတောင် မစောင့်တော့၊ ..အေးလေ အန်တီတယောက်ထဲလည်းပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ပါပဲ၊ ဘယ်အချိန်လောက်ရောက်မှာလည်း…. နိူင်နိုင် ဖုံးပြန်ချလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဦးချစ်ဆွေ ကလိထားလို့ သူ့စောက်ဖုတ်တခုလုံးလည်း ရွဲစိုနေပြီ။ နောက်ပြီး သူနဲ့ မောင်စောကြည်လုပ်တာကိုလည်း ဦးချစ်ဆွေ ချောင်းကြည့်နေမှာဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုက အရမ်းဖြစ်နေသည်။ ဦးချစ်ဆွေကလည်း မနက်အိပ်ယာထ အားအပြည့်နဲ့မို့ နိုင်နိုင့်ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်တင်လို့ တဖောင်းဖောင်းချနေလိုက်သည်မှာ နောက်တနေ့ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလားဟုပင်ထင်ရလေတော့သည်။ ဦးချစ်ဆွေနှင့် နိုင်နိုင်မှာ တယောက်နှင့်တယောက် ဘာမှ လျို့ဝှက်ချက်မရှိကြပေ။ မနေ့ညက ဦးချစ်ဆွေနှင့် ချစ်ပွဲဝင်ရင်း နားနေရသော အချိန်တွေမှာ နိုင်နိုင်က သူခရီးသွား စွန့်စားခန်းများကို ပြောပြနေပေရာ၊ ကောင်းခန်း ရောက်လိုက် ဦးချစ်ဆွေက ထဆွဲလိုက်၊ တချီပြီးတာနဲ့ နောက်တခန်းပြော၊ ဦးချစ်ဆွေ စိတ်ထလာပြီး တချီဆွဲလိုက် ဖြစ်နေရသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း မောင်စောကြည် ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း ဦးချစ်ဆွေက သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ အပြောနှင့်တောင် သူ စိတ်တက်ကြွရသဖြင့် တကယ်မြင်ချင်လာ မိနေတုန်း မောင်စောကြည် ဖုံးဆက်သည်ဆိုတော့ ဒါလိုချင်လို့ပဲ ဆိုတာ ဦးချစ်ဆွေ သိလိုက်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်နိုင့်ကို မီးစိမ်းပြလိုက်တာ။ နိုင်နိုင့် သူငယ်ချင်း အိဖြူ ဆိုတာကိုလည်း လုပ်ချင်နေမိသည်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အလှမ်းဝေးသည်လေ။ နိုင်နိုင်က သူတို့ အခန်း နှင့် ကပ်ရက် ဧည့်သည်ခန်းမှာ ဦးချစ်ဆွေကို ဝင်နေစေပြီး အပြင်က သော့ခတ်ထားလိုက်သည်။ ထိုအခန်းမှနေ၍ သူတို့ အခန်းကို ချောင်းဖို့ အပေါက်တွေရှာရ၊ ချဲ့ရနှင့် ဦးချစ်ဆွေ တယောက် အလုပ်ရှုတ်သွားရသည်။ နေ့ခင်း နှစ်နာရီလောက်ကျတော့ မောင်စောကြည်တယောက် ပေါက်ချလာတော့သည်။ နိုင်နိုင်နှင့် မောင်စောကြည်တို့ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ စကားတွေ ပြောနေကြပြီး အိပ်ခန်းထဲ ရောက်မလာသေးသဖြင့် ဦးချစ်ဆွေတယောက် နည်းနည်းတင်းလာမိသည်။ သူက စောင့်နေရတဲ့သူမို့ပါ။ တကယ်က ဘယ်လောက်မှ မကြာ။ နိုင်နိုင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တာနှင့် မောင်စောကြည်တယောက်အိမ်ထဲ ဝင်လာရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လည်းလုပ် နိုင်နိုင့်ကိုလည်း ကြည့်ရင်း မျက်လုံးတွေက တခုခု သိချင်နေသလိုလို။ နိုင်နိုင်က အထာပေါက်ပြီးသား မောင်စောကြည် ၏ ဂဏှာမငြိမ်ပုံ ကို ပြုံးကြည့်နေပြီးမှ။
..အန်တီ တယောက်ထဲပါကွယ့် ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး ။အန်တီ့ အမျိုးသားက ရှေ့တန်းမှာလေ၊ အထူးစစ်ဆင်ရေးဆိုလား သွားနေလို့.. ..အဟီး..အန်တီက အရမ်းချော၊အရမ်းလှတာပဲနော်..သေခြာကြည့်လေ ပိုချောလေပဲ.. ..အောင်မလေး မြှောက်မနေနဲ့ ကိုယ်တော်ချော ဘာစားမလဲပြော ကော်ဖီသောက်မလား… ..စားလာခဲ့ပြီ အန်တီရဲ့ ကျနော်ဆာနေတာ က ဒီပြင့်ဟာ.. ..အောင်မလေး .ဘာများ ဆာနေရတာလဲ.. ..ဟီးဟီးသိရဲ့သားနဲ့ဗျာ..ဒါနဲ့ အန်တီအန်တီနဲ့ လုပ်နေတာ အဲလောက်လည်းမကြီးသေးပဲနဲ့ဟာကို.. ..အဲဒါ ဆိုလည်းမမ ပြောင်းခေါ် ကဲ..ခစ်ခစ်.. ..မမ.. ကိုနမ်းချင်တယ်… ..ဟင် ဧည့်သည်က လည်း ထိုင်တောင်မထိုင်ရသေးဘူး .. ထနေပြီ အဟိ.. ..မမ ရယ် မနောက်ပါနဲ့ တကယ်ပြောတာပါ.. ..အို့.. ..ပြွတ်စ်.. မောင်စောကြည်က လည်း လက်သွက် ခြေသွက် မီးစိမ်းမြင်တာနဲ့ စဆွဲပြီ။ နိုင်နိုင့်ကိုယ်လုံးလေးကို အတင်းဆွဲဖက်ပြီး မျက်နှာအနှံ့ ဖက်နမ်းတော့သည်။ ..အို အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ကွာ.. အခန်းထဲသွားမှ ဦးဦးချစ် မြင်ရမှာမို့ နိုင်နိုင်က နည်းနည်းမူလိုက်သည်။
..ဒါဆိုလည်း မမ အခန်းထဲ သွားမယ်လေ.. ..အောင်မယ် သူက ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ ဘယ်သူက အခန်းထဲ သွားမယ်ပြောလို့လည်း.. နောက်တော့လည်း အခန်းထည်း ရောက်လာကြတာပဲပေါ့။ ဦးဦးချစ်မှာတော့ စိတ်ထဲမှာ နှမြောသလို မနာလိုသလိုလို တော့ဖြစ်မိသည်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်နိုင်က သူ့မယားမှ မဟုတ်တာလေ။ နဂိုထဲက မှ သူလည်း သူများမယားကို ဆွဲနေတာ ဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ သူက နိုင်နိုင့်ကို ယောက်ျားမယူခင်ကထည်းက ဆွဲခဲ့ရတာမဟုတ်လား၊ အဟီးး။ ဒါတောင်မှ သူလက်နှေးလို့ ဒုတိယလူ ဖြစ်သွားရတာ။ ဦးချစ်ဆွေ တယောက် အတွေးနဲ့ကို သူ့ကောင်ကြီးက တောင့်တင်းနေပြီး ထိပ်ဖျားက ပုဆိုးကို ပွတ်နေတာ နာသလိုရှိလာသဖြင့် ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ချထားလိုက်တော့သည်။ နိုင်နိုင်တို့ နှစ်ယောက်ရွှေ့လျှားနေရာကို မြင်ကွင်းကောင်း သည့်အပေါက်လှည့်ပတ်ကာ ချောင်းနေလေတော့သည်။ နိုင်နိုင် မှာ ဒီတခါတော့ တော်တော့်ကို အရည်စိုရွဲနေရလေသည်။ မနေ့တနေ့က မှ သိသော ကောလိပ်ကျောင်းသား ကောင်လေးတယောက်ကို ကိုယ့်အိမ်ပေါ်က လင်မယားအိပ်သည့်ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ကိုယ့် ချစ်ပထွေး ဦးဦးချစ်ရှေ့ အလိုးခံ ရမှာက နေ့တိုင်းကြုံရမဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးမှ မဟုတ်တာကို။ မောင်စောကြည်က သူနှင့် နူတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းနေရင်း လက်တွေက နိုင်နိုင့်တကိုယ်လုံးကို သမနေသည်။
နိုင်နိုင် ကအိမ်နေရင်းပေမဲ့ မောင်စောကြည်လာမယ် ဆိုတော့၊ မြူဆွယ်မဲ့ပုံမပေါက်မောင်၊ အပျံစား အသားကောင်းကောင်း ရင်ဖုံးအင်္ကျီ နှင့် အချိတ်ထမိန် မရမ်းစေ့ရောင် ဝမ်းဆက် ကို ပွဲနေပွဲထိုင် သွားမလို ဝတ်ထားသည်။ မောင်စောကြည် မျက်လုံးထဲ မှာ အရမ်းလှနေပေမဲ့ သူက အတွင်းပစ္စည်းတွေကို လင်းလင်းချင်းချင်း အလင်းရောင် အောက်မှာ ကြည့်ချင်နေပြီ ဆိုတော့ အမြန်ချွတ်ပြစ်နေတော့သည်။ အတွင်းကလည်း အသားရောင် ဘရာဇီယာ အပျော့၊ အသားရောင် ဖင်ကြားညှပ်ပင်တီ တို့ကို ဝတ်ထားပေရာ မောင်စောကြည် တယောက် သရည်တမျှားမျှား ကို ကျသွားရသည်။ မောင်စောကြည်က နိုင်နိုင့်ကို ကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်ခိုင်းပြီး နိုင်နိုင့်ဖင်ကြားညှပ်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ် ချလိုက်သည်။ နောက်မှ ပေါင်နှစ်လုံးကြား ခေါင်းဝင်ကာ ကမူးရူးထိုး နမ်းရှုံ့ တော့၏။ နိုင်နိုင့် အဖုတ်တခုလုံးအရည်တွေနဲ့ ရွှဲစိုနေတာတွေ့လိုက်ရတော့ သူ့ကို စောင့်နေရင်း ဒီကောင်မကြီး စိတ်အရမ်းထနေတာဖြစ်မယ်ဟု တွေးရင်း ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်။ သူ့လျှာကြီးဖြင့် တပြတ်ပြတ်မြည်အောင်ရက်ပေးလေတော့သည်။
မောင်စောကြည်၏ နွေးထွေးသောလျှာကြီးမှာ နိုင်နိုင့်အဖုတ်နူတ်ခမ်းသားလေးတွေ စောက်စေ့ကလေးတွေကို ထိုးဆွ ရက်ပေးနေတော့ နိုင်နိုင့်ခမျှာ တဖက်ခန်းက ချောင်းနေသော ဦးဦးချစ် ကိုပင်ခေတ္တမျှ မေ့သွားခဲ့ရသည်။ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ကာ စောကြည် ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ထားလိုက်မိလေတော့သည်။ မောင်စောကြည်ဘာဂျာမှုတ်တာ ကောင်းလွန်းသဖြင့် နိုင်နိုင့်ခမျာ မွေ့ယာပေါ် ပက်လက်လှန်ကျသွားခဲ့ရလေသည်။ မောင်စောကြည်က လည်း သူ့သွားရည်များနှင့် နိုင်နိုင့် စောက်ရည်ကြည်များကို သူ့လက်ခလည်မှာလူးပြီး နိုင်နိုင့်ခရေပွင့်လေးကို လက်တဆစ်ခန့် ထိုးကစားလေရာ နိုင်နိုင်တယောက် ခနလေးဖြင့် ကာမ အရသာအထွတ်အထိတ်ကို ရောက်သွားရလေတော့သည်။ နိုင်နိုင်တယောက် ကိုယ်လုံးလေး တောင့်တင်းပြီးမှ တကိုယ်လုံးပျော့ခွေသွားတာတွေ့ရတော့ တချီပြီးသွားမှန်း မောင်စောကြည်သိလိုက်သည်။ သူလည်း ပါးစပ်ညှောင်းဇက်ညှောင်းပြီမို့ အမောဖြေသည့်အနေဖြင့်၊ အိပ်ယာပေါ် နိုင်နိုင့်နဘေးဝင်ကာ ပက်လက်လှဲနေလိုက်သည်။
သူ့ပုဆိုးကိုလည်း ကန်ချွတ်ထားခဲ့ပြီမို့ သူ့ကောင်ကြီးက အလံတိုင်ကြီးလို မတ်ထောင်လျှက်ရှိနေပေသည်။ ..ကဲ ငါ့မောင်နားအုန်း အမပြုစုအုန်းမယ်.. နိုင်နိုင် က အိပ်ယာပေါ်ထထိုင်လိုက်ပြီး မောင်စောကြည်၏ အလံတိုင်ကြီးကို ကုန်းကာ ငုံစုပ်လိုက်သည်။ နောက်တော့ သူ့ခေါင်းကို နိမ့်ကာမြင့်ကာဖြင့်၊ မောင်စောကြည်လိင်ချောင်းကြီးကို သူ့ပါးစပ်ဖြင့်လုပ်ပေးနေတော့သည်။ လုပ်ပေးနေရင်းလည်း ဦးဦးချစ် ကြည့်နေမည်ဖြစ်သော နံရံဘက်ကို လည်း လှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီး မျက်ခုံးပင့်ပင့်ပြနေပေသည်။ ဦးဦးချစ်ချစ်တယောက်လည်း သူ့ပြောင်ကြီး သူကိုင်ကာ၊ ဆုပ်လိုက် ပွတ်တိုက်လိုက်ဖြင့် တကုန်းကုန်းချောင်းနေလေသည်။ မောင်စောကြည်မှာ အရင်းတင်းနေပြီမို့ ရေရှည်မထိန်းထားနိုင်ရှာပေ၊သို့သော်သူကလည်း ပထမဆုံးအချီကို ပါးစပ်ထဲမထုတ်ချင်ပေ။
..အား..အမ ..ခန ကျနော် ထွက်သွားလိမ့်မယ်ခနလေး.. နိုင်နိုင်က မောင်စောကြည်လီးကြီးကို သူ့ပါးစပ်မှ ချွတ်လိုက်ပြီး၊ ..ပါးစပ်ထဲ ပြီးချင်ပြီးလိုက်လေ.. ရပါတယ်ကွယ့်… ..ဟင့်အင်း..ကျနော်က မမ စောက်ဖုတ်ကိုပဲ ပထမဆုံးလုပ်ချင်တာ..အဟီး.. ..ကဲပါ ကိုယ်တော်ချောလေးသဘော.. မောင်စောကြည် တယောက် ဘာဆေးတွေများစားလာသလည်းမသိ။ နိုင်နိုင်တယောက်တော့ ကားဆင်းသွားရသည်။ လုပ်လိုက်တာလည်း ပုံစံမျိုးစုံ အပေါက်လည်းကုန်၊ နိုင်နိုင့်မွေ့ယာခင်းတခုလုံးလည်းပေပွ။ မောင်စောကြည်ပြန်လို့ တံခါးဝကို နိုင်နိုင် လိုက်ပို့တော့တောင် နိုင်နိုင် တယောက် နုံးချည့်နေပြီ။ မောင်စောကြည်အိမ်ပြင်ထွက်သွားလို့ လမ်းထိပ်တောင်မရောက်သေး၊ သရဲမရဲ စီးနေသော ဦးချစ်ဆွေက ရေဆေးတောင်မစောင့်၊ အသားကုန်ဗျင်းတော့သည်။ နိုင်နိုင့်အတွက် တပတ်စာဖူလုံသွားသည်လို့သာပြောရတော့မည်။
နောက်နေ့ ဦးချစ်ဆွေ ပြန်သွားပြီး နှစ်ရက်လောက်မှာ နိုင်နိုင့်ယောက်ျား ဗိုလ်မူးအောင်နိုင်ပြန်ရောက်လာသည်။ နိုင်နိုင်လည်း အသားပြန်သေစ ဟိုက ငတ်ပြတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ကောင်က ထပ်ပြီး ဗျင်းပြန်တော့ ပြိုင်းသွားရပြန်ပါသည်။ နောက် နှစ်ပတ်လောက်နေတော့ သူ့ယောက်ျားခရီးပြန်ထွက်ရသည်၊ ဒီတခေါက်က တခြားကိစ္စ။ သူ့ယောက်ျားခရီးထွက်သွားပြီး နောက်တရက်နှစ်ရက်မှာ လူက မအီမသာဖြစ်၊ မနက်အိပ်ယာထ အံချင်သလိုဘာလိုလို ဖြစ်တော့ ဆရာဝန်သွားပြသည်။ ဆရာဝန်က သူ့သူငယ်ချင်း မေနန်းခေါင် ၏ ခဲအို ဒေါက်တာနောင်ရဲ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ထင်သည်ဟု ပြောသည်။ နောက်ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိ ဟိုဟာကို သေခြာစစ်ဆေးပြီးမှ ပြောလို့ရမည်ဆိုပြီး အဖုတ်ကို လှန်ကြည့်သည်၊ နောက် သူ့ လက်အိပ်စွတ်ထားသော လက်ချောင်းကြီးနှင့် ဟိုဖြဲဒီဖြဲကြည့်သေးသည်။ ဟွန့် အမျိုးသား တွေ အိုဂျီဘီဝိုင် လုပ်နေကြတာ သူသိပ်မသင်္ကာ၊ မိန်းမ လူနာလာတိုင်း ဟိုဟာဖြဲကြည့်ခွင့် လိုင်စင်ရနေကြသည်။
တော်တော်ဝါသနာကြီးသည့်သူတွေပဲဖြစ်မည်ဟု သူတွေးနေမိသည်။ မေနန်းခေါင်က တော့ ပြောပါတယ်၊ ငါ့အမ ယောက်ျားက ရိုးပါတယ်တဲ့။ ငါ့တုန်းကတောင် မီးမမှန်တာ သူကြည့်ပေးတာပဲတဲ့။ အင်း။ ထားလိုက်ပါတော့လေ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်နိုင်စိတ်ပူနေတာက သူ့ယောက်ျား နှင့်သူ ဆက်ဆံဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကမှ ဆိုတော့ အခုနေ သူကိုယ်ဝန်ရှိတယ် သွားပြောရင်၊ သူယောက်ျားက ပြဿနာရှာတော့မည်။ မေနန်းခေါင် ကိုကပ်ပြီး ပြောကြည့်သည်။ သူကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ဆိုတာကို ရက်ရွေ့ပြီးပြောပေးလို့ရမလားပေါ့၊ သူစိုးရိမ်မိတာကိုလည်းပေါ်တင်ပဲပြောလိုက်သည်။ မေနန်းခေါင်က ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ သူ့ခဲအိုသူပိုင်ကြောင်း၊ နင်ကြိုက်တဲ့နေ့ကို ပြောအဲဒီနေ့မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ သူ့ကို ပြောခိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလို့ စိတ်နည်းနည်းအေးသွားရလေသည်။ မေနန်းခေါင်တယောက် သူ့ခဲအိုကို တော်တော်ပိုင်ပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာလည်း တမျိုးတော့ဖြစ်မိသည်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေဟု သာ နိုင်နိုင်တယောက်တွေးလိုက်မိပါတော့သည်။ …အဲဒါပါပဲ အိဖြူရယ်၊ ငါတော့ ပြောရခက်နေပြီ အဲဒီတုန်းက သေခြာလည်းမသိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီ ဆိုတော့မှ ငါသွားစဉ်းစားလိုက်မိတာ။ အဲဒီအတောအတွင်းမှာ နင့်ယောက္ခထီးကြီးရယ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး တယောက်ရယ်၊ ငါ့ပထွေး ရယ်၊ ငါ့ယောက်ျားရယ်၊ အဲဒီလေးယောက်နဲ့ သွားခဲ့ဘူးတယ်။ မောင်စောကြည်နဲ့ ဦးဦးချစ်ကတော့ ခွဲလို့ရမယ်မထင်ဘူး၊ တယောက်ကနေ့ တယောက်ညလိုဖြစ်နေတာ၊ ခစ်ခစ်.. ..စောက်ကောင်မစုတ် အရေးထဲ ရီနေသေးတယ်၊ ငါ့မှာဟယ် သားအဖနှစ်ယောက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ဟာမှန်းသေခြာမသိဘူး၊
တကယ်တော့ ငါ့ သမီးက အရေးမကြီးဘူး ဘယ်သူ့ခလေးဖြစ်ဖြစ် ဒီသွေးပဲ နင့်ခလေးကို ပဲ စစ်ဖို့လိုမယ်ဟ… ..အင်း စစ်ဆိုရင်လည်း နင့်ယောက္ခမကြီးကိုပဲ သွေးစစ်မှ ရတော့မှာပဲ။ မောင်စောကြည်ကလည်း ဘယ်နားသွားရှာရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး၊ ငါ့ပထွေးကလည်း ဆုံးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကပဲ… ..အင်း ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း… ..နင့်ယောက္ခထီးကြီး ဆီက နေနင်သွေးစစ်ချင်လို့ဆိုပြီးယူလို့မရဘူးလားဟ..မထူးပါဘူးဟာ ငါလာခဲ့မယ်၊ ငါ့သား ကိုပါ တခါထဲ သွေးစစ်ပြီး ဒီအန်အေ တက်စ်လုပ်ကြည့်မှ ရမှာပေါ့.. ..အင်း.. ငါပြောရင်တော့ ရမှာပါ..ဒါပေမဲ့ ခု သူမရှိဘူး၊ အခု စလုံးမှာ ငါ့ယောက်ျား ဆီလိုက်သွားတယ် ကျန်းမာရေး စစ်မလို့တဲ့ လေ.. ဟောတော့ အရေးထဲမှာဟယ်..တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ.. ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟဲ့.. ..
ငါ့ ယောက္ခမ ကြီးကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ကောင်းမလား သူ့ဆီက အကြံညဏ်လေးဘာလေးရအောင်.. ..အင် ဖြစ်ပါ့မလား နင့်ယောက္ခမကြီးက ရိပ်မိသွားမှာပေါ့.. ..အေးဟယ် နင့်ကို ငါမပြောဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်.. ..ဘာလည်း ပြောစမ်းပါအုန်းကောင်မရယ် နင်ကလည်း လျို့ဝှက်လိုက်တာ တခါထဲ.. ..ငါနဲ့ ယောက္ခထီးကြီးတို့ ဖြစ်တာကို ယောက္ခမကြီး မိသွားတယ်.. ..ဟဲတော့..ဘုရားရေ..အင်း ဒါပေမဲ့ နင်အခုမှ ငါ့ကို ပြောပုံထောက်ရင် နင်တို့ ပြဿနာ အကြီးအကျယ်မတက်လိုက်ဘူး မဟုတ်လား… ..အင်းဟဲ့ ပထမတော့ ငါ လည်း သေတော့မတတ်ပေါ့လန့်သွားတာ.. ..ဟဲ့ ဒါနဲ့ နေပါအုန်း နင်က အဲဒီတုန်းက နင့်ယောက်ျားဆီ မသွားခင် နင်တို့ကို မိသွားတာလား.. ..မဟုတ်ဘူးဟဲ့ ပြန်လာမှ..အဟီးး.. ..အော်ကောင်မ တော်တော်ထ… ပြန်လာတော့ ဆက်ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့… ..ခစ်ခစ်..နင်ကလည်းဟာ သိရဲ့သားနဲ့ နင်က ငါ့ထက်တောင်ဆိုးသေးတာကို.. ..အေးပါအေးပါ ဆက်ပြောစမ်းပါအုန်း သွားရည်ကျစရာလေးတွေကို..ခစ်ခစ်.. ..အေး. ငါပြန်လာပြီးတော့ ငါလည်း စိတ်နည်းနည်းအေးသွားတာပေါ့ဟ၊ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဖေကြီးက ပြန်လာနူးတယ်ကွာ..ငါလည်း နဂိုထဲက စိတ်ပါပါ ဆိုတော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာ..နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အတင့်ရဲလာကြပြီး တချို့ ဟာတွေ လစ်ဟာသွားကြတာ တနေ့တော့ တန်းတိုးတော့တာပဲ၊
ပိုဆိုးတာက ငါက ကိုယ်ဝန်ကြီး တော်တော်ရင့်နေပြီ.. …ဟဲတော့ ကောင်မစုတ် ကဲလိုက်တာ.. ခွိခွိ.. …ယောက္ခမ ကြီးက တော်တော် ပွက်တာပေါ့၊ ငါ့ကိုတော့ မဟုတ်ဘူး သူ့ယောက်ျားကို .. ခလေးထိခိုက်မှာစိုးလို့တဲ့ ၊ သူ့မြေး ကလေးကိုတဲ့၊ ဒီလောက်တောင်နှာပွစရာ ရှားလားပေါ့ကွာ..ဟိုဟော်တယ်က ကောင်မတွေ သွားလုပ်ပါလား ဘာညာနဲ့၊ ငါလည်းရှက်လိုက်တာကွာ လဲသေချင်တော့တယ် အဲဒီနေရာမှာ.. ….ခစ်ခစ်…ခစ်ခစ်… ..ငါလည်းတော်တော်အံသြသွားတယ်က ယောက္ခမကြီးက သူ့ယောက်ျား ဖောက်ပြန်တာရော ငါ့ကိုရော ဘာမှ မပြောပဲနဲ့ သူ့မြေးလေး ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ဒေါပွတာကို ငါနောက်မှ တွေးမိတယ်…
အဟီး.. ..ကောင်မ နင် ငါ့ကို မလျိုနဲ့တော့ နင်ခလေးမွေးပြီးတော့ရော နင့်ယောက္ခထီးကြီးနဲ့ ဆက်ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား… ..အင်း .. ငါ့သမီးလေး နို့တိုက်တော့ ၊ ပထမ ငါ့နို့ချောင်းက ပိတ်နေတယ်ကွာ၊ သမီးလေး စို့လို့မရဘူး အဲဒါနဲ့ ယောက္ခထီးကြီးက စို့ပေးရင်း နဲ့ ခိခိ..တော်ပြီကွာ ရှက်လာပြီ၊ နင်က ငါ့ကို တမျိုးထင်တော့မှာပဲ… ..အင်း နင့်ဟာက ငါတောင်အားကျလာပြီ၊ ခစ်ခစ် အနားမှာ တယောက်မရှိ တယောက်ရှိဆိုတာလိုပဲ ဟွန်း..အေး နင့် ယောက္ခမ ကြီးဆီကို နည်းနည်း အကြံတောင်းကြည့်ပါလား ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုပြောကြရမလည်းဆိုတာ၊ သူက လူကြီးဆိုတော့ အတွေ့အကြုံပိုရှိမှာပေါ့… ..အေးအေး ငါညနေကျရင်ဖုန်းဆက်မယ်.. နင်သာ လာဖို့ပြင်ထားလိုက်လက်မှတ်တွေဘာတွေ ဘုတ်ခ် လုပ်ထားတော့… ..အေးပါ.. အေးပါ… …ကလင်..ကလင်… …ဟယ်လို… …မိနိုင်လား…. ..အေးအိဖြူ ဘာထူးလဲ… ..နင်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပလား…မဝယ်ရသေးရင် မလာနဲ့တော့… ..ဟေ…ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်ပြီလဲ ဟ…ဖုန်းပဲဆက်ထားတာ ပြန်ပြောလိုက်ရင်ရတယ် မယူတော့ဘူးလို့…
..အဲဒါဆိုလည်းဖုန်းဆက်လိုက်တော့ ငါတို့ကိစ္စ ရှင်းသွားပြီ… ..ဟဲ့ ပြောစမ်းပါအုန်း ဟ.. ရှင်းရှင်းလင်းလင်း.. ..ဒီလိုဟဲ့ .. ကိုမျိုးဆွေက ငါ့ယောက္ခထီး နဲ့ ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ငါ့ယောက္ခမကြီးက ပြောတယ်၊ အဟီးး ဘယ်သူ့မှ မပြောဖို့လည်းငါ့ကို နူတ်ပိတ်တယ် အဟီး။ ငါ့ယောက္ခမကြီး ဒေါ်နီလာက တခြားကောင်နဲ့ ဖြစ်ပြီးရထားတာတဲ့။ ဦးအောင်အောင်ဆွေက မျိုးမအောင်ဘူးတဲ့။ ခိခိ။ တကယ်တော့ ဦးအောင်အောင်ဆွေကလည်းသိတယ်တဲ့ဟဲ့။ ခိခိ။ ငါက တကယ်တော့ အအေးမိပြီး ဟိုလာလာတာ နောက်ကျ တာကို ဆရာဝန်နဲ့ မစစ်ပဲ ကြောက်လန့်ပြီး ငါ့ယောက်ျားဆီကို ထွက်သွားလိုက်တာ၊ ဟိုမှာကျမှ တကယ် ဗိုက်ကြီးသွားတာဟ။
အခုမှ ငါလည်း ယောက္ခမကြီးပြောမှ ရက်တွေ ပြန်တွက်ကြည့်မိတာ။ ငါ့ယောက္ခထီးကြီးကလည်း သူ့တို့ လျို့ဝှက်ချက်ကို ငါမသိစေချင်တော့ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီး ငါ့ကို ကိုမျိုးဆွေ ဆီပို့လိုက်တာ၊ ခစ်ခစ်။ ကဲ အဲတော့ ငါတို့ ကလေးနှစ်ယောက် က ဘာမှ မဆိုင်တော့ဘူး။ နင်ပဲ သဘောတူသလား ဒါပဲပြော.. ..ခစ်ခစ်.. ကောင်မရယ် နင်နဲ့ငါက ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ၊ ခစ်ခစ်.၊ အော် ငါတို့လည်တယ် ဆိုတာ နင့်ယောက္ခမကြီး ခြေဖျားတောင်မမှီပါလားဟယ်၊ ခစ်ခစ်။ ငါတို့က တောင် ငါတို့ ယောက်ျားတွေ မသိအောင် ဖုံးနေရသေးတယ်။ နင့်ယောက္ခမကြီးကတော့ သူ့ယောက်ျားကတောင် လိုက်ဖုံးနေရတာပါလား ခစ်ခစ်…